KACHINSTATE.NEWS ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကချင်ပြည်နယ်သတင်းkachinstate.news
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ရှမ်းနှင့် ကချင် တိုင်းရင်းသား ရိုးရာစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းများ ပူးပေါင်း၍ ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး လက်မှတ်ထိုး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်မည်။
ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်၊ မန်စီ၊ ဒေါ့ဖုန်းယန် စသည့် ဒေသတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်း၍ အဖွဲ့ဝင် (၁၇) ဦးပါဝင်သည့် “ကချင်ပြည်နယ် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများအဖွဲ့” ကို ယမန်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
ယင်းအဖွဲ့မှ ဒေသအလိုက် တအိမ်တက်ဆင်း လူထုဆန္ဒ ကောက်ခံသည့် လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဗန်းမော်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးဇော်သင်းက အခုလိုပြောသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး တောင်းဆိုတဲ့ စာပေ့ါဗျာ။ ဒီလို စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နောက်ကျနေတဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီတော့ သင်တို့ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ။ လက်မှတ်ရေးထိုးပါဆိုတဲ့ စာရွက်တွေ ဖြန့်ဝေမယ်။”
လွန်ခဲ့သည့် မေလကုန်ပိုင်းမှစတင်၍ ဒေသတွင်း ရှမ်း၊ ကချင်နှင့်လီဆူး တိုင်းရင်းသား တက်ကြွလူငယ်များက လက်မှတ်များ စတင်ကောက်ခံနေကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းများကဆိုသည်။ သို့သော် တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် ခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ယမန်နေ့က တင်ပြခဲ့ရာ ခရိုင် ဥက္ကဌနှင့် မတွေ့ခဲ့သော်လည်း SB ခေါ် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတချို့က “ခင်ဗျားတို့တောင် နောက်ကျ နေပြီတဲ့၊ ဒါအစောကတည်းက လုပ်ရမယ့် ကိစ္စလေ။” ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးဇော်သင်းက ဆိုသည်။
ကောက်ခံရရှိသည့် လက်မှတ်များအား နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံ ပေးပို့မည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကောက်တဲ့အခါမှာ နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ လက်မှတ်ဆိုပြီး မူရင်းနှစ်စောင် လုပ်ပြီးမှ တခုကို KIO ဌာနချုပ်ကို ပေးမယ်၊ နောက်တခုကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ကျနော်တို့ ပေးမယ်။ ကျန်တာ မိတ္တူဆွဲပြီးမှ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတို့ NLD ဗဟိုဌာနချုပ်တို့ကို ပေးမယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေကနေ UN တို့ အာဆီယံ နိုင်ငံတို့ဆီ ပေးပို့မယ့်အထိ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။”
ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ထောက်ခံသည့် အခြားသော ပါတီ အဖွဲ့ အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ယနေ့ညနေတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ တာဝန်ထပ်မံ ခွဲယူကြမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ တစညပါလာမယ်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး ပါမယ်၊ တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံးကပါမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းကလည်း ပါလာလိမ့်မယ်။ ကနေ့ညနေ သုံးနာရီမှာ ကျနော်တို့ အစည်းဝေးလုပ်မယ်။ အဲဒီမှာ သူ့တာဝန်ကျရာ ကိုယ့်တာဝန်ကျရာ အားလုံး တာဝန်ယူပြီး ၀ိုင်းလုပ်ကြမယ်။”
အဖွဲ့ဥက္ကဌအဖြစ် ကချင်အမျိုးသား ဦးလ၀မ်က တာဝန်ယူပြီး ဒုဥက္ကဌအဖြစ် ရှမ်းအမျိုးသား ဦးစိုင်းဖုက တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးများ အဖြစ် ကချင်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ တာဝန်ခွဲယူခဲ့ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များအတွင်း ဒေသခံ အခြား တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်နှင့် KIO တို့ တိုက်ပွဲပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တနှစ်တာ ကာလအတွင်း မြို့ပေါ်ဒေသများ အပါအ၀င် တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် တလျောက်နှင့် KIO ဌာနချုပ်သို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည်ပေါင်း (၇) သောင်းကျော်ရှိသည်ဟု မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်သည့် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (HRW) အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
အစိုးရနှင့် KIO တို့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တနှစ်တာအတွင်း နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပြီးသော်လည်း တစုံတရာ သဘောတူညီချက် မရသေးပါ။
ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၀)ရက်နေ့
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသာလူမျိုးစုများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ယင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးသည် နှစ်ပရိစ္ဆေဒ များစွာကပင် တစ်မြေတည်းနေ တစရေတည်းသောက် အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသော ညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်။ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီး သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးသည်
ယခုအခါ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIA)အဖွဲ့ များကြားပဋိပက္ခ များဖြစ်ပွားလျှက် ရှိပါသည်။ ယင်းပဋိပက္ခ များကြောင့်သေကြေဆုံးရှုံး ပျက်စီးမှုများ ၀မ်းနည်း ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည့်အပြင်
တန်ဖိုးကြီးမားသည့်အဆောက်အဦးများ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သတ္ထုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများယိုယွင်း
ပျက်စီးမှုများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများလည်း အတဒုက္ခများစွာ ရောက်နေကြသည့်အပြင် အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများကိုပါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မည့်အန္တရယ် ရှိနေပါသည်။
ယင်းပဋိပက္ခများနှင့် ပြဿနာများကို အင်အားသုံး၍ ဖြေရှင်းကြမည်ဆိုလျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဆုတ်ယုတ်မှုများသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို စစ်ရေးနည်းများဖြင့် တည်ဆောက်၍မရနိုင်ပါ။နိုင်ငံရေး
နည်းလမ်းဖြစ်သောဆွေးနွေးညှိုနိုင်းဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ တည်ဆောက်သွားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း
နိုင်ကြမှသာလျှင်ပြည်ထောင်စုကြီး၏အနာဂတ်ကို အာမခံနိုင်မည့် စစ်မှန်သောတိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညှိညွှတ်မှိုကိုရရှိနိုင်မည်
ဖြစ်ပါသည်။စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးပြေလည်မှုမရရှိလျှင် ပြည်တွင်းစစ်မီးသည်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသားအချင်းချင်းကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်
နားလည်မှု အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှုတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းကြမည်ဆိုလျှင် ပြေလည် မှုရရှိကြပြီး ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်
မည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှသာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလေုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်
သို့ပါ၍ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွါး
ရေးရှေးရှု ၍ ယခုဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခ များကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြပါရန်နှင့် အမြန်ဆုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲံကြပါရန် လေးနက်စွာ
အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပံ့ ပိုးရန်အတွက်ကျွန်ုပ် တို့နှင့်အတူ ကိုယ်စွမ်း ရှိသမျှပါဝင်ကြိုးပမ်း ပေးရန် ပြည်သူလူထုအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားအားလုံး အလိချင်ဆုံးအတောင့်တဆုံး ၊ဆန္ဒ
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားမျာူး၏ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း
မှတ်ချက်။ ။မြို့နယ်အသီးသီး မှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလိုလားသူ ပြည်သူများမှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအား လုံးဝ မထိခိုင်စေဘဲ ငြမ်းချမ်းစွာ စည်တန်းလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တိုက်ပွဲရပ်စဲရေး သမ္မတထံ လိပ်မူ၍ ကချင်ကျောင်းသားများတောင်းဆို
ကချင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် လူမှုဘေးဒုက္ခကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ လိပ်မူ၍ ကချင်ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်သမဂ္ဂ (AKSYU) မှ စာပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အသစ်ပြောင်းဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာအစိုးရသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) အား ဆက်လက်၍ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသည်မှာ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့တွင် တနှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် အစိုးတပ်များ တိုက်ခိုက်ခြင်းများရပ်၍ စစ်မှန်သောဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် ကချင်ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်သမဂ္ဂ (AKSYU) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုနော်ဆန့် ပြောသည်။
“သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို လိပ်မူတဲ့ စာကို သူတို့ သံရုံးရှေ့မှာ ဖတ်ပြတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ သံရုံးတာဝန်ခံကို အဲဒီစာပေးတယ်။ သံရုံးတာဝန်ခံက လက်ခံထားတယ်။” ၄င်းက ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ လိပ်မူသည့် ၄င်းစာသည် အဓိကအားဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း စစ်ပွဲများရပ်စဲရေးနှင့် လူမှုဘေးဒုက္ခများရပ်စဲသွားရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၇၁ ဖွဲ့က ပူးပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မေ ၅ ရက် အဂါင်္နေ့ နံနက်တွင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး ရှေ့တွင် ကချင်ကျောင်းသားများမှ ဦးဆောင်၍ လူအင်အား ၄၀ ဦး ခန့်နှင့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြသေးသည်။
နိုင်ငံတကာတွင်ရောက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများလည်း အပစ်ရပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန် ၇ ရက်မှ ၁၄ ရက်ကြားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုများကို အသီးသီး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင်လည်း မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIO) ကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အစီစဉ်များကို ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရသည်။
ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့နယ် က၀ါးပန်ရွာ တွင်ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ကျောင်းဆရာမ ၀န်းထမ်းသုံးဦးနှင့်ကျောင်းသူ နှစ်ဦးအားအတင်းအဓမ္ဓမဖမ်းဆီး
မေလ(၂၆)ရက်နေ့က အထက ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးမောင်မောင်သန်း ဆွမ်ပရာဘွမ် ကတ်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဇော်နန်နှင့် ပေါင်း(၆)ဦးတို့သည်
မြစ်ကြီးနားမှဆွမ်ပရာဘွမ်သို့ ဆိုင်ကယ် သုံးစီးဖြင့် ရှေ့မှမောင်းနှင် ထွက်ခွာပြီး မြစ်ကြီးနားဆွမ်ပရာဘွမ် ခရီးသည် တင်ယာဉ်ငယ်နှစ်စီးတွင် ကျောင်းဆရာ (၇)ဦး ဆရာမ (၁၀)ကျောင်းသူနှစ်ဦး လိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့
မေ(၂၇) နံနက်(၈)နာရီအချိန် မိုင်တိုင်(၈၀) အရောက်ရှေ့ကားမှာမိုင်းနင်းမိပြီး၊ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ မော်တော်ယဉ်ဝမ်းဗိုက်အောက် တွင် ကပ်ချီထားသော စပါယ်ရာ
ဘီးကိုသာ ထီမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွါခဲ့ရာ နံနက်(၉)နာရီအချိန် မိုင်တိုင်(၈၃)မိုင် က၀ါးပန်ရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရွာအတွင်းမှထွက်လာကာ
၄င်းကားနှစ်စီးအားတားပြီး ကားပေါ်ပါ ခရီးသည်နှင့် ၀န်ထမ်းများအားကားရပ်ထားရာမှ ကိုက်တစ်ရာခန့်အကွာ ရွာအတွင်းနေအိမ်သို့ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ ကေအိုင်အေ အရာရှိဟု
ယူဆ သူထံ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်၊ အလုပ်အကိုင် စသည့်အချက်အလက်များကို သွားရောက်ပေးဆောင်ခဲ့ရ။
၄င်းတို့မှတ်တမ်းများ ရယူပြီး အောက်ပါ ကျောင်းဖွင့်ရန်သွားသော ဆရာမသုံးဦးနှင့် စာသင်ကြားရန် ပြန်သောကျောင်းသူနှစ်ဦးတို့အား ဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့။
၁။ ဒေါ်ခိုင်သက်မွန်(၂၁)နှစ်-မူပြ၊ အထက ဆွမ်ပရာဘွမ်
၂။ဒေါ်ဂျာမိုင်လု (၂၂)နှစ် -လယ်ပြ၊ အထက ဆွမ်ပရာဘွမ်
၃။ဒေါ်နန်ရွယ် (၂၅)နှစ် -မူပြ၊ အမက မလိယန်
၄။မဂျာရာ (၁၆) နှစ် ဒသမတန်း၊ အထက ဆွမ်ပရာဘွမ်
၅။မဆိုင်းတောင်(၁၆) ဒသမတန်း၊ အထက ဆွမ်ပရာဘွမ်(မိုင်ထောင်ရွာ)
၄င်းတို့ ထဲမှကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ကတ်သလစ်အသင်းတော် ဆရာတို့မှာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားသော်လည်း ဖမ်းဆီးခံရခြင်း မရှိပဲ လွတ်မြောက်သွားခဲ့။ကားနှစ်စီးမှ
ခရီးသည်များအားကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့မှ အထက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာခြင်းမပြုရန်နှင့် သတ္တိရှိ ကဆက်တက်ရန် ပြောသော ကြောင့် ဆက်မတက်ရဲဘဲ မြစ်ကြီးနားသို့
နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လာခဲ့ပြီး ။ထိုအချိန်၌ ပူတာအိုမှ အရပ်ကား (၁၅) စီးဆင်းလာရာ ၄င်းကား(၁၅) စီးနှင့်အတူ မြစ်ကြီးနားပြန်လာကြောင်းသိရ။ ပူတာအိုမှ ဆင်းလာ
သော ၄င်းအရပ်ကား(၁၅)စီးမှလည်း ကေအိုင်အေ သို့ ဆပ်ကြေးအဖြစ် ကားတစ်စီးလျှင် ကျပ်(၅၀၀၀၀ိ/-)နှုန်းနှင့် ငွေကျပ်၇သ်ိန်းခွဲပေး ဆောင်ခဲ့ရ။
ပြန်ဆင်းလာသော ကားများသည် ထိုနေ့ တွင် မိုင်တိုင်(၇၆)ရှိ ဒရူခ ကျေးရွာတပ်စခန်း သို့ရောက်ရှိရာ တပ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများက အရပ်ကုန်ကားများအား
စေလွတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ၀န်ထမ်းများစီးလာသောခရီးသည်တင်ကား နှစ်စီးအား အန္တရယ်ရှိသည့်အတွက် တပ်စခန်းတွင် (၃)ညအိပ်စေပြီး ၃၀ရက်နေ့ နံနက်(၁၁း၃၀)နာရီ
ဆက်လက်ထွက်ခွါစေခဲ့သည်။ ၄င်းညတွင် အလက ခွဲ တီယန်ဆွတ် ကျောင်း ၌ ညအိမ်ပြီး မေ(၃၁)ရက် နေ့လည်(၂)နာရီတွင် ဆက်လက် ထွက်ခွါပြီး ည(၈)နာရီခွဲတွင် မြစ်ကြီးနား
မြို့ပြည်နယ်ပညာရေး ရုံးသို့သွားရောက်သတင်းပို့ပြီး ပညာရေးမှုး၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိကျောင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရ။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပိုင် ကားနှစ်စီး နှင့် အရပ်ကားတစ်စီးမီးရှို့ခံရ
မေလ၊ ၁၄ရက်က ပူတာအိုမြို့နယ် စီနင်ခ တံတားဆောက်လုပ်ရန်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအထူးအဖွဲ့(၂)မှ
တံတားနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများတင်ဆောင်သွားသော ဌာနပိုင်ကားနှစ်စီးနှင့် အရပ်ကားတစ်စီးအားကေအိုင်အေ(ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်)အဖွဲ့က ဖျက်ဆီးမီးရှို့ခဲ့ကြောင်း ခရီးသွားပြည်သူတစ်ဦးပြောပြချက်အရ သိရှိရ။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဌာနပိုင်၊ မီးရှို့ခံရသော ကားနှစ်စီးအနက် ၅ခ -၉၃၄၆ FAW အမျိုးစား ၆ဘီးယာဉ်ပေါ်တွင်
ကျောက်ခွဲစက်တစ်လုံး၊ စက်သုံးဆီ နှင့် ရိက္ခာများပါဝင်ပြီး ၉က- ၅၂၇၁ FAW တစ်ပါ(၁၀)ဘီးယာဉ်ပေါ်တွင် ၀ရိန်စက်တစ်စုံ
ကွန်ကရစ်မြေစာ တစ်လုံး၊ သံပိုက်ပေ(၃၀)ရှည်တစ်လုံး၊ လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ကယ် ၂စီး၊ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရ။
မီးရှို့မခံရမီ ၄င်းကားများကို ခကရမ်းယန် ကျေးရွာတပ်စခန်းတွင် တာဝန်ခံ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) ဦးနေ၀င်းနှင့် ယာဉ်မောင်းဦးမိုးသန်းညွှန့်နှင့်ဦးဇော်တို့ သုံးဦးကားများထား၍ ပြန်ဆင်းလာစဉ် မေလ(၁၄)ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့များ
ရောက်ရှိလာပြီး ၄င်းကားများအား လမ်းပေါ်သို့ ရောက်အောင် ပူတာအိုမှပြန်ဆင်းလာသော အရပ်ကားကြီးနှင့် ဆွဲထုတ်ကာလမ်းပေါ်ရောက်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟုသိရ။
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာမှ၎င်းကားများအား ကေအိုင်အေမှမဖျက်ဆီးရေးအတွက် ကေအိုင်မှတောင်းသော
ငွေကျပ်၇သိန်း ပေးဆောင်ထား သော်လည်း လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်သည်ကို မလိုလားမှု များကြောင့်
မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာများကလည်း ဌာနပိုင် ကားမီးရှို့ခံရသည်ဟုမထင်မှတ်ပဲ အရပ်ကားများကိုတာမီးရှို့ သည်ဟုသာသိရှိထားရာ ခရီးသွားများမှ ပြန်လည်ပြောပြသဖြင့် သိရှိရ။
ဆင်းရဲသော ပြည်သူထဲမှအလုပ်သမားရေမစေးသမားများအား အသေခံမလား၊ အဖွဲထဲဝင်မလားမေးခွန်းဖြင့် အတင်း အဓ္ဓမ စစ်သားစုဆောင်း
မေ(၃၁) ရက်နေ့က ဖားကန့်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင် ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ရေးမစေး ကျောက် ရှာဖွေလုပ်ကိုင် စားသောက်နေသော နိုင်ငံ အနံ့မလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သည့်
အခြေခံလူတန်းစား တစ်ရာကျော်အား ကေအိုင်အေ ရင်း(၆)မှ အဓ္ဓမ စစ်သားစုဆောင်းသွားကြောင်းသိရ
၄င်းတို့ကိုစုဆောင်းရာတွင် ကေအိုင်အေမှ “မင်းတို့အသေခံမလား အဖွဲ့ထဲဝင်မလား”မေးခွန်းနှစ်ခုသာ မေးပြီး ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းလွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦးမှ
ဧရာဝတီ| May 31, 2012 | Hits:56
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အစိုးရ နှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) ကိုယ်စားလှယ်များ ဇွန်လ ၁ ရက် နေ့တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် လွယ်ဂျယ် မြို့နယ်အတွင်း၌ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော် မတီမှ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားပြီး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမည်ဟု KIO နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၁ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်ရိုင် နယ်စပ်တွင် ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် တချို့နှင့် ကချင် ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) မှ ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်တို့ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
လမ်းတွေ တံတားတွေနဲ့ရန်သူတော် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIAတပ်မတော်
30-5-2012ရက်နေ့ည09း00နာရီ အချိန် ခန့် ဖားကန့်မှထွက်ခွာလာသော ဖာကျဲရိုး ခဲရောင် ကားနံပါတ်
၇က/၆၈၁၂ကားပေါ်မှ အောက်မော်ဖောင်းတံတား (နန်းကွေ့ချောင်းတံတား)ဘယ်ဘက် တွင်မိုင်း ပစ်ချဖောက်ခွဲခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိ
ကေအိုင်အေ နှင့် အစိုးရတပ် စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့် ဒေသခံလူထုအခက်တွေ့
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်တို့ကြား စစ်ရေးပဠိပက္ခအရှိန်ပိုမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသခံများ မိမိအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
“ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း မြို့ပြင်မထွက်ဖို့ ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက သတိပေးထားတယ်၊ အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာဟာ မေလ တတိယပတ်ကစဖြစ်လာတယ်၊ လုံခြုံရေးကားတွေ၊ SB ကားတွေ၊ ရဲကားတွေ အဆက်မပြတ်ကင်းလှည့်နေလို့ အခိုက်မသင့် ရင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခံရမှာစိုးလို့ ဘယ်သူမှအပြင်ထွက်ရဲတော့ဘူး” - ဟု ကျောက်မဲသား စိုင်းစံ ကပြောပါသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တို့ နှစ်ဘက်ပြင်းထန်လာသော တိုက်ပွဲကြောင့် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူ၊ သိန္နီ အပြင် လားရှိုး၊ သီပေါ နှင့် ကျောက်မဲ မြို့နယ်အထိ ဂယက်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖြစ် ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအရှိန်ကြောင့်ခရီးသွားများ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ၊ လူထုအသက် အိုးအိမ်လုံခြုံမှုများ ထိပါးလာကြောင်းဒေသခံ များပြောချက်အရ သိရပါသည်။
“ကျနော်တို့ နမ္မတူကနေ မန်တုန်ဘက်သွားတဲ့လမ်းက အစိုးရတပ်က အရမ်းသွားလာလှုပ်ရှားတယ်။ သီပေါ၊ ကျောက် မဲက တပ် တွေ အဲဒီဘက်အကုန်တက်တယ်၊ ရပ်ရွာတိုင်း ၀င်ထွက်မွေနှောက်တယ်။ အဲဒါကို ကချင်တပ်က အစိုးရတပ် နဲ့အချိန်မရွေး တိုက် ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်။ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ကားတွေကို ပြီးခဲ့ သောကြာ နဲ့ စနေနေ့လောက်က တွေ့တဲ့ကားတွေကို မသွား လာဖို့ ကိုပြောထားတာ။ ဒီရက်တွေတော့ ကားတွေမရှိသလောက်ဘဲ” - ဟု နမ္မတူသား စိုင်းအိုက်ကပြောပါတယ်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားနေသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်အပြင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း/မြောက်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့၊ တအန်င်း(ပလောင်) အမျိုးသား လွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော် TNLA နှင့်ကချင်လွတ် လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တို့ ဖြစ်သည်။ ရွှေလီရေ အားလျှပ်စစ် မဟာဓါတ်အားလိုင်း တာဝါ တိုင် (မန်တုံမြို့နယ်အတွင်း) ၃-၄ ခုအား မေလလယ်က ဗုံးခွဲခံရမှုတွင် အစိုးရသတင်း စာက ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ၏ လက်ချက်ဟုစွပ်စွဲထားပါသည်။
ထို့နောက်ပိုင်း အစိုးရတပ်များလည်း အဆိုပါဒေသဘက် စစ်အင်အားတိုးဖြည့် လှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောပါသည်။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်သည် အရပ်ဝတ် ၀တ်ဆင်ကာ၊ အရပ်သားများ၏ ကားကိုအသုံးပြု၍၊ ညပိုင်းတွင် စစ်တပ် သွားလာလှုပ်ရှားမှုများ ပိုတိုး လာသဖြင်၊့ လားရှိုးနှင့် မူဆယ် ကြားတွင် ပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဟု တပ်မဟာ (၄) KIA အရာရှိတစ်ဦးပြောသည်။
ဤ ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ညပိုင်တွင်သာဖြစ်ပြီး၊ နေ့ခင်းပိုင်းတွင်မူ ပုံမှန်သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဝေစာများကို လမ်းများတွင်ကပ်ထားခြင်း၊ ဖြန့်ကြဲထားခြင်းဖြင့် ဖြန့်ဝေကြောင်း ၎င်းအရာရှိကပြောသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂွမ်မော်က ဗပိာုကော်မတီမှ အမိန့်ထုတ်ထားခြင်းမရှိ ကြောင်းနှင့် ရှေ့တန်းမှ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် သတိပေးတားမြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒီဗီဘီသတင်းဌာနှ ၂၈ ရက်နေ့ ရေဒီယိုသတင်းတွင်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
မေ၂၂ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် မေလ ၁၉ ရက်နေ့ညက မန္တလေးမှ မူဆယ်သို့ တက်လာသည့် ကုန်တင်ကား ၂ စီးကို ဆတ်ကြေးတောင်း၍ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် (KIA) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၏ လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် (KIA) တပ်မဟာ (၄) အရာရှိတစ်ဦးက၊ ထိုကားနှစ်စင်းသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ လက်နက်များ၊ စစ်ယူနီဖောင်းများကိုတင်ဆောင်ခြင်းမပြုရန် သတိပေးသည် ကိုနားမထောင့််သဖြင့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း KNG သတင်းဌာန ကိုရှင်းပြသည်။
မန်တုန်-နမ္မတူ ကားလမ်းမကြီးကိုလည်း တပ်မဟာ (၄) လက်အောက် တပ်ရင် (၈) နှင့် (၃၄) တို့မှ ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် ၄င်းလမ်းမကြီးတွင် ခရီးသွားလာမှုများမရှိတော့ကြောင်း သိရသည်
ကျောက်တူး စက်ယန္တာယားများ ရုတ်သိမ်းရန် ကချင်ပြည်နယ် တိုင်းမှူး ညွှန်ကြား
ကချင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် ဖါးကန့်ဒေသတွင် ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်နေသော စက်ယန္တာယားကြီးများကို မေလ (၃၀) ရက် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ပြီး ရုတ်သိမ်းရန်၊ မြန်မာအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဇေယျာအောင် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ကုမ္မဏီများ ကျောက်တူးဖော်ရာတွင်အသုံးပြုသော မြေတူးစက်၊ မြေကော်စက်နှင့် မြေတင်ကားများ အားလုံးကို ကချင်ပြည်နယ် အနောက်တောင်ဘက် ဟိုပင်နှင့် မိုးညင်းဒေသ သို့မဟုတ် အောက်မြန်မာပြည်သို့ ရုတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု ကုမ္ပဏီများ ဆိုသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)သည် ကုမ္ပဏီများထံမှ အခွန်ကောက်ခံ ရရှိနေခြင်းကို ဖြတ်တောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင်၊့ စက်ယန္တာယားများ ရုတ်သိမ်းအမိန့်ကို ကချင်ပြည်နယ် တိုင်းမှူး ဇေယျာအောင်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကုမ္မဏီများ ဆက်ဆိုသည်။
ဖားကန့်တွင် လက်ရှိ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်နေသည့် ကုမ္ပဏီကြီး ၂၀၀ ခန့်နှင့် စက်ယန္တာယားကြီး ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ကို KIO ဖါးကန့်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတစ်ဦးထံမှသိရသည်။
တိုင်းမှူးအမိန့်ထွက်လာပြီး နောက်မကြာမီတွင် (KIO) ဘက်မှလည်း ကုမ္ပဏီများအား ၎င်းတို့၏ စက်ယန္တာယားများ ရုတ်သိမ်းခြင်း မပြုရန် သတိပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မေ တတိယ ပတ်မှစပြီး ကုမ္ပဏီအချို့မှ စက်ယန္တာယားများ ရုတ်သိမ်းလာခြင်းကို ဖါးကန့်-မိုးကောင်းလမ်းပေါ် တွင်၊ ဖါးကန့်အခြေစိုက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၆ မှ တားမြစ်ကာ ၄င်းယန္တာယားများအား ဖါးကန့်သို့ ပြန်ခေါက်စေခဲ့ကြောင်းကို တပ်ရင်း ၆ အရာရှိများထံမှသိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၁၇ နှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကာလတွင် KIO သည် ဖားကန့်တွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်း ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရအဖွဲ့သစ်မှ ၎င်းအား ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၉ ရက်တွင် စတင် တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီး နှစ်ဘက်ကြား စစ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှ KIO သည် ဖါးကန့်တွင် အခွန်ပြန်လည် ကောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရသည် ကချင်ပြည်နယ် ဖါးကန့်မှ ကျောက်စိမ်းနှင့် အခြား သယံဇာတများမှ နှစ်စဉ် တတိယ အများဆုံး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိသည်
တိုင်းရင်းသားဒေသခံများ လိုလားချက် အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစိုးရ အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားပြီးနောက် တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုလိုသည့် ဆန္ဒသဘောထား အမြင်များသိရှိရန် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးမြို့တွင် အစိုးရက ဒေသခံ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ယင်းဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီမှ ဦးသိန်းဇော်က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများအပါအ၀င် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနှင့် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဒု ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်တွင်းငြိမ်းရေးကို တည်ဆောက်နေတဲ့ အချိန်ကာလ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ အခြေခံဥပဒေ ဘယ်အပိုင်းကို ပြင်ဆင်ချင်သလဲ၊ ဘယ်လို ဆန္ဒရှိကြသလဲ အဲဒါတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တက်ရောက်လာသော တိုင်းရင်းသား ဒေသခံအများစုက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြဌာန်းခွင့်တို့ကို လိုလားသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းရင်းသား အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရာတွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေ၏ အားနည်းချက်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ယင်းအခြေခံ ဥပေဒေကို ပြင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်၊ အုပ်ချုပ်ခွင့်တို့ကိုလည်း ကြိုးစားပေးမှသာလျှင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်တံ့ရန်အတွက် အထောက်အကူ ပြုမည်ဟု ပြောဆိုကြကြောင်း ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသားများ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးပွဲပြီးသည့် ညနေပိုင်း၌ အစိုးရ အထက်တာဝန်ရှိသူများထံ ပေးပို့လိုက်ကြောင်း ကြားသိရသည်ဟု ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက ပြောသည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့အနေနှင့် လူခွဲ၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် အပါအ၀င် တခြားသော ဒေသများမှ တိုင်းရင်းသားများနှင့် လိုက်လံတွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာ ဆက်ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ နှစ်ရပ်ကို ယခု မေလ ၃ ရက်က အထူးညွှန်ကြားချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား ဒေသခံများနှင့် လိုက်လံတွေ့ဆုံနေခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော ဗဟိုကော်မတီအနေနှင့် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ ထူထောင်သုံးစွဲခြင်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက “အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားချက်က ဘာလဲ၊ အဲဒါကို သူတို့ သေချာ အရင်လေ့လာဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အနားသိမှ ဆေးရှိနိုင်တာကိုး။ ဒါကို ဂရုမစိုက် စိတ်မ၀င်းစားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကို ဂရုမစိုက်၊ စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင် ငြိမ်ချမ်းရေးရဖို့ဟာ အများကြီး အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုလို ခြေလှမ်းစလာတာကတော့ အကောင်းဘက်က မြင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မင်းသုတ- ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO အား မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်ဒေသ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ကျောင်းသားများ ပိုမိုရောက်ရှိလာနေကြောင်း ကချင်ပညာရေးဌာနမှ ဆရာအောင်မိုင်က ပြောသည်။
“အခုတလောရောက်ရှိလာတဲ့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားက ၆၈ ယောက်၊ မူလတန်းက ၆၃ ယောက်၊ အရင်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် ၂၃၂ ယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်၊ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ မိဘတွေပါခဲ့တယ်” ဟု ဆရာအောင်မိုင်က ပြောသည်။
၄င်းအပြေအရ မိုင်ဂျာယန်ဒေသ၌ ၅ တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိ လက်ရှိကျောင်းသားဦးရေ ၆၉၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
“မိဘတွေနဲ့အတူမရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေနေထိုင်ဖို့ သီးသန့်အဆောင်ဆောက်ပေးရတယ်၊ အခုမှအထက်တန်းကျောင်းသားတွေနေထိုင်ဖို့အတွက် အဆောင်စပြီးဆောက်လုပ်နေရတယ်” ဟု ဆရာအောင်မိုင်က ဆက်ပြောသည်။
မိုင်ဂျာယန်မြို့တွင် အထက်တန်းကျောင်း၊ လူငယ်ဖွံဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ အထူးသင်တန်းကျောင်းများရှိသည်။
ကချင်ဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး WPN( ပြည်သူ့အလင်း)မှ မိုင်းဂျာက “ အခုတလော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ကျောင်းသားတွေရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်၊ ကျောင်းနေရာမလောက်တော့ မနက်ပိုင်းတစ်ဖွဲ့ ညနေပိုင်းတစ်ဖွဲ့ သင်နေရတာလည်း ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်ကာလဖြစ်သည့်အပြင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသ၌ မြန်မာစစ်တပ်များ ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေသဖြင့် စစ်ပြေးများနှင့်အတူ ကျောင်းသားဦးရေ ပိုမိုတိုးများလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိုင်ဂျာကယူဆသည်။
အထူးသဖြင့် အသစ်ရောက်ရှိလာသောကျောင်းသားများ နေထိုင်မည့်အဆောက်အဦးများအပြင် စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အိပ်ယာများသာမက မီးဖိုချောင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများလည်း လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။
ပြည်တွင်းမှအစိုးရမဟုတ်သော NGOs အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့မှုများကို လက်ရှိမြန်မာအစိုးရက ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာရောက်ကချင်အမျိုးသားများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှအကူအညီများသာ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
KIO လက်အောက်ခံပညာရေးဌာနတွင် တပ်မဟာ (၁)ရှိ အင်ဂွမ်လ အထက်တန်းကျောင်း၊ တပ်မဟာ (၃)ရှိ မိုင်ဂျာယန် အထက်တန်းကျောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ(၄)ရှိ လွယ်ကန် အထက်တန်းကျောင်းနှင့် တပ်မဟာ (၅)ရှိ လိုင်ဇာ အထက်တန်းကျောင်းဟု စုစုပေါင်း ၄ ကျောင်းရှိသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ(နဝတ) KIO ၁၉၉၄ ခုနှစ် အပစ်အခတ်ရပ်သည့်ကာလမှစပြီး ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)မှ ၁၀တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား မြန်မာအစိုးရတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်အစီအစဉ်ကို ယခုအခါဖျက်သိမ်းထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ငြိမ်းကော်မတီအား လူထုပြော
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အဓိက လိုလားချက်ဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေပါ အချက်အချို့အား ပြင်ဆင်ပေးရန် တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကော်မတီအား ကချင်ပြည်သူလူထုမှ တင်ပြဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်ဦးဆောင်သည့် တိုင်းရင်းသား ရေးရာနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူများ၏ အခက်အခဲများ၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ အခက်အခဲများကို လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“လူထုကတော့ အဓိက ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း ပြောကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး constitution ထဲက အချက်တွေ ပြင်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း သူ့ဒေသက လူထုအတွက် လုပ်ကိုင် ပေးချင်ပေမယ့် သူတို့အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ အခြေအနေတချို့ကိုလည်း တင်ပြကြတယ်” ဟု ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဒွဲဘူ က ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည် ပြောပြသည်။
သို့သော် ဆွေးနွေးချက် အသေးစိတ်ကိုမူ မသိရှိရပေ။
ဦးသိန်းဇော် ဦးဆောင်သည့် ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦး ရှိသော်လည်း မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဒွဲဘူနှင့် ကော်မတီဝင်တဦးတို့သာ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် သီးသန့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
“၂၉ ရက်နေ့မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကို သွားမယ်။ အဲဒီမှာလည်း အရင် ခရီးစဉ်တွေလိုပဲ အစိုးရအဖွဲ့ရယ် လွှတ်တော်အဖွဲ့ရယ် မြို့မိမြို့ဖတွေရယ် တွေ့ကြမှာပေါ့” ဟု အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီသည် မန္တလေးတိုင်းမှ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့သို့ ဆက်လက် သွားရောက် လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် နေပြည်တော်တွင် ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဦးစိုင်းပေါင်းနပ် ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီ သည်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့သို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်နေပြီး ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့မှ တဆင့် နေပြည်တော်တွင် ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ပူးပေါင်းကော်မတီသည် မေလ ၂၂ ရက်မှ စတင်၍ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများသို့ လေ့လာရေး ခရီးများ စတင် ထွက်ခွာလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖား​ကန့်​ ​ကျောက်တူး​ဖော်မှု ယာယီပိတ်ပင်
ကချင်ပြည်နယ် ဖား​ကန့်​မှာ ​ကျောက်မျက်ရတနာ တူး​ဖော်​နေတဲ့​ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ​တွေအား​လုံး​ ​ကျောက်စိမ်း​တူး​ဖော်ထုတ်ယူမှုကို ယာယီ ရပ်နား​ထား​ဖို့​ သတ္ထုတွင်း​ဝန်ကြီး​ဌာနက ညွှန်ကြား​ချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မိုး​တွင်း​ကာလမှာ ​ဘေး​အန္တရာယ်ကင်း​ရှင်း​ရေး​ အ​ကြောင်း​ပြချက်နဲ့​ ခုလကုန်ကစပြီး​ ​ကျောက်မျက်တူး​ဖော်တဲ့​ လုပ်ငန်း​တွေ ရပ်နား​ထား​ဖို့​ညွှန်ကြား​လိုက်တာလို့​ သတ္ထုတွင်း​ဝန်ကြီး​ဌာနက ​ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ ​မေ ၂၂ ရက်​နေ့​မှာ လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေကို သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​က ​ခေါ်ယူ​တွေ့​ဆုံပြီး​တော့​ ​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။ ပိတ်ပင်ရတာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ သတ္တုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာန ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ချုပ် ဦး​ဝင်း​ထိန်က အခုလို ရှင်း​ပြပါတယ်။
“မိုး​တွင်း​ကာလမှာ တချို့​ ကုမ္ပဏီတခုချင်း​က​နေ ရပ်တန့်​တာ​တွေရှိပါတယ်။ အခုက​တော့​ သတ္တုတွင်း​ဝန်ကြီး​ဌာနက ​ဘေး​အန္တရာယ်ကင်း​ရှင်း​အောင် ​မေလကုန်ကစပြီး​ ရပ်တန့်​ဖို့​ အသိ​ပေး​ထား​တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုး​တွင်း​ကာလကို ဆိုလိုတာပါ။ သွား​ရေး​လာ​ရေး​နဲ့​ ​နေထိ်ုင်စား​သောက်​ရေး​ ခက်မယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ပျက်စီး​မှုကို ကာကွယ်တဲ့​အ​နေနဲ့​ မိုး​တွင်း​ကာလ ၄၊​ ၅ လ​လောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ပွင့်​လင်း​ရာသီမှာ ပြန်လုပ်ခွင့်​ပေး​မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဖား​ကန့်​ဒေသမှာ ​ကျောက်တူး​ အလုပ်​တွေ စတင် ရပ်နား​တော့​မှာ ဖြစ်တဲ့​အတွက် တချို့​ ​ကျောက်တူး​ဖော်​ရေး​အလုပ်သမား​တွေက ​နေရပ်အိမ်​တွေကို ပြန်​နေကြပြီလို့​ ​ဒေသခံတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
“​ကျောက်တူး​တာ​တွေ ရပ်သွား​တာ​တော့​ ​ကောင်း​ကျိုး​ဘက်ကို ဦး​တည်တာ များ​ပါတယ်။ ဖား​ကန့်​မှာ မှီတင်း​နေထိုင် လုပ်ကိ်ုင်စား​သောက်ကြတဲ့​ ​ဒေသခံ​တွေနဲ့​ အ​ခြေခံလူတန်း​စား​ နည်း​နည်း​ပါး​ပါး​လောက်ပဲ အလုပ်လက်မဲ့​ ဖြစ်သွား​တာရှိတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲဒီလို ရပ်လိုက်ခြင်း​အား​ဖြင့်​ သဘာဝ ​တော​တောင် ပျက်စီး​တာ​တွေ၊​ ​ကျောက်စိမ်း​တောင်​တွေ ပျက်စီး​တာ​တွေ အဲဒီဟာ​တွေ တိုင်း​ပြည်အတွက် အများ​ကြီး​ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။”
၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်း​ကလည်း​ တိုက်ပွဲ​တွေ​ကြောင့်​ ​ကျောက်မျက်တူး​ဖော်​ရေး​ လုပ်ငန်း​ခွင်​တွေ ရပ်နား​ခဲ့​ပြီး​ အလုပ်သမား​တွေလည်း​ ဖား​ကန့်​က​နေ စွန့်​ခွာခဲ့​ရပါတယ်။
ခုလို အစိုး​ရက ​ကျောက်တူး​ဖော်မှု​တွေ ရပ်နား​ဖို့​ ညွှန်ကြား​တာဟာ ​ဒေသခံ​ကျောက်ကုမ္ပဏီ​တွေက ကချင်လွတ်​မြောက်​ရေး​တပ်မ​တော် ​ကေအိုင်​အေ တပ်​တွေကို အခွန်​ငွေ​တွေ အ​မြောက်အမြား​ ထည့်​ဝင်​နေတာ​ကြောင့်​ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့​ ထင်​ကြေး​ပေး​မှု​တွေလည်း​ ထွက်​ပေါ်​နေပါတယ်။
သတ္ထုတွင်း​ဝန်ကြီး​ဌာနက​တော့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ကို ထိန်း​သိမ်း​တဲ့​အ​နေနဲ့​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​လပိုင်း​က မြန်မာနိုင်ငံ အဓိက မြစ်ကြီး​ ၄ သွယ် အနား​မှာ ​ရွှေနဲ့​ သတ္ထုတူး​ဖော်​ရေး​တွေ မလုပ်ဖို့​လည်း​ အမိန့်​ထုတ်ပြန်ထား​ပါတယ်။
ဒါ့​ပြင် အရင်တုန်း​က မြစ်​ချောင်း​တွေနား​မှာ ချထား​ပေး​တဲ့​ လုပ်ကွက်​တွေကို ပြန်လည်သိမ်း​ဆည်း​တာ​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့​ပြီး​ သတ္ထုတူး​ဖော်တဲ့​ ​နေရာများ​မှာလည်း​ သစ်ပင်​တွေ ပြန်စိုက်ဖို့​ သတ္ထုတွင်း​ ဝန်ကြီး​ဌာနက ညွန်ကြား​ထား​ပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​လည်း​ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း​ သတ္ထုတူး​ဖော်ရာမှာ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ပျက်စီး​ဆုံး​ရှုံး​တဲ့​ ဓာတ်ပုံ​တွေက​တော့​ အင်တာနက်စာမျက်နှာ လူမှုကွန်ရက် ​ဖေ့​ဘွတ်မှာ ပျံ့​နှံ​နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့အတွင်း မေ ၂၈၊ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြင်းထန်သည့် ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း မြစ်ကြီးနားဒေသခံ များပြောသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် နံနက် ၆ နာရီ ခွဲချိန် ယုဇနရပ်ကွက်ရှိ ရွှေပြည်စံ စားသောက်ဆိုင် အနီးတွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးပြောသည်။
“ဒီမနက်ကျနော် ဖြတ်သွားတဲ့ အချိန်ပေါက်ကွဲတာ အဲဒါပေါက်ကွဲတဲ့ အသံကြောင့် ကျနော်ဘေးက ဖြတ်သွားတဲ့ တစ်ယောက်တောင် လန့်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့လဲသွားတယ်။”
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ မရှိသော်လည်း ၎င်းအနီးရှိ ရွှေပြည်စံ စားသောက်ဆိုင်မှ မှန်အချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသည်ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုကို မည်သူ သို့မပာုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း လက်ချက် ဖြစ်သည်ကို မသိရပါ။
ပေါက်ကွဲချိန်တွင် အစိုးရစစ်ကားတစ်စီးဖြတ်သွားကြောင်း မျက်မြင်သက်သေက ဆက်ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကြား စစ်ဖြစ်ပွားရာမှ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း မကြာခဏ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် အစိုးရက မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် မေလမှစပြီး လုံခြုံရေး တင်းကြပ်လာသည်ဟု မြစ်ကြီးနားဒေသခံများပြောသည်
. တရုတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ မြန်မာ အသာရပြီ
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၌ ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ကုန်သွယ်မှုပိုငွေရရှိနေရာမှ ပြီးခဲ့သည့်၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် မြန်မာဘက်က ပိုငွေရရှိခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန(စီးပွား/ကူးသန်း)မှ သိရသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည့်အတွက် ပြီးခဲ့ သည့် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ၂ ဘီလီယံ တိုးတက်မှု ရှိလာကြောင်း စီးပွား/ကူးသန်း ၀န်ကြီး အကြံပေး စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ မောင်အောင် က ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု၌ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် မြန်မာဘက်က ပို့ကုန်မှာ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရှိပြီး သွင်း ကုန်မှာ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင် ပို့ကုန်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၉၃၀ ကျော်ရှိပြီး သွင်းကုန်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၈၆၀ ကျော် ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း စီးပွား/ကူးသန်း စာရင်းများအရ သိရသည်။
“မြန်မာနဲ့တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ကုန်သွယ်မှုရှင်းတမ်းအရ အရင်ကဆိုရင် အမြဲတမ်းပိုငွေ ရရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မြန်မာဘက်က ကုန်သွယ်မှုပိုငွေ ရရှိတာဖြစ်လို့ ခြားနားချက်က အရင်ကလို ကွာခြားချက် သိပ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အလားအလာကောင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာ မောင်အောင် က ဆိုသည်။
စီးပွား/ကူးသန်းမှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်း၌ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရှိသည့်အနက် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီ ယံ ခန့် ရရှိခဲ့သောကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ရှိသည့်အနက် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၌ တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မှုများရှိနေ သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ဆုံးရှုံးမှုများရှိနေသည်ဟု သမ္မတ ၏ စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဦးမြင့် က မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတခုတွင် ပြောဆိုသည်။
“မိုင် ၁၃၈၀ ကျော် ရှည်လျားတဲ့ နယ်စပ် ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက်တွေကို တကယ်တမ်းမှာ လိုက်ပိတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တရားမ၀င် ၀င်ထွက်နေတာကို တရားဝင် ကုန်စီးဆင်းမှုရှိလာအောင် ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် တရားမ၀င် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုန်စည် စီးဆင်းမှုက ရှိနေဦးမှာပါ”ဟု ဒေါက်တာဦးမြင့် က ဆိုသည်။
ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများကို ဖြေလျှော့ရန် သဘော တူညီမှု ရှိထား၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် မူဝါဒ များကြောင့် လာဘ်စားမှုများ ပေါ်ပေါက်စေသည့်အတွက် မူဝါဒပိုင်း ဆိုင်ရာ၌ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ၄င်းက ပြောကြားသည်။
စီးပွား/ကူးသန်းမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးကလည်း“မြန်မာနဲ့ တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ တရားမ၀င် ကုန်စီးဆင်းမှုရှိနေတာ တွေကို လျော့သွားဖို့ အတွက် စီးပွား/ကူးသန်း အနေဖြင့်လည်း နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေမှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်း အသစ် တွေ ကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုန်ပစ္စည်းတွေ စီးဆင်းတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ကိစ္စကိုလဲ လွယ်ကူလျင်မြန်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်မှပဲ တရားမ၀င် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုက လျော့ကျ လာမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ လက်ရှိတွင် မူဆယ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၊ လွယ်ဂျယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းနှင့် ချင်းရွှေဟော် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အဓိက ပို့ကုန်အနေဖြင့် သစ်များကို အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုရှိနေသည့်အပြင် ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက် ရတနာ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်၊ တွင်းထွက် ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများကို တရားမ၀င် တင်ပို့မှုများရှိနေကြောင်း ဒေါက်တာဦးမြင့်က ပြောသည်။
ဒေါက်တာဦးမြင့်က ဆက်လက်၍ တရုတ်နိုင်ငံအနေနှင့် သစ်လုံးတင်သွင်းမှု မြင့်တက်ရသည့် အကြောင်းရင်းသည် ပရိဘောဂ ပြုလုပ်ရန် အတွက် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက် မြင့်နေခြင်း၊ ပြည်ပ ဈေးကွက်အနေနှင့်လည်း ဥရောပ၊ အမေရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများသို့ ပရိဘောဂ၊ သစ်ခွဲသားနှင့် သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုများ ရှိနေသည့်အပြင် တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကဖြစ် ခဲ့သော ယန်စီမြစ်တလျှောက် မြစ်ရေလျှံမှုကြောင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ သစ်တောကဏ္ဍကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သစ်ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။
“ဒီအချက်တွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ တရားမ၀င် သစ်တင်သွင်းမှုက ကမ္ဘာမှာ နံပါတ် ၁ အဆင့်မှာ ရှိနေတယ်”ဟု ဒေါက်တာ ဦးမြင့် က ဆိုသည်။
မြန်မာနှင့်တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွင် မြန်မာဘက်က လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက် ပစ္စည်းများ၊ သစ်နှင့် တွင်းထွက် ပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့နေပြီး သွင်းကုန်အနေဖြင့် စားသောက်ကုန်နှင့်လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာ လုပ်ငန်းသုံး စက် ပစ္စည်း များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို အဓိက တင်သွင်းမှုရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ယမန်နှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) နှင့် အစိုးရ တပ်တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွားမှုများ ရှိနေရာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ထိခိုက်မည်ကိ်ု တရုတ် အာဏာပိုင်များဘက်က စိုးရိမ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံသား စီးပွားရေးသမားများကိုလည်း စစ်ရေး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေသော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလာမှု မပြုလုပ်ရန် သတိပေး တားမြစ်မှုများလည်း ပြုလုပ်ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းကို တရုတ် အာဏာ ပိုင်များက နှစ်နိုင်ငံ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှု၍ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို အလေးထားရန် ပြောကြားခဲ့သေး သည်။
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)တို့သည် ၂၀၁၁ ခု နိုဝင်ဘာလ မှစတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ရေရာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များ မရရှိသေးပေ။
ဦးအောင်မင်းနှင့် KIO ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တွေ့ဆုံ
Written by သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ မေလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ Monday, 21 May 2012 21:08
အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တချို့ ယနေ့နံနက်က အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် KIO ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်တို့ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တနေရာ တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း KIO အဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေမှူး ဒေါက်တာ လဂျာက အခုလို ပြောသည်။
“ကျနော်နဲ့ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ သွားကြတာ။ အလွတ်သဘောပါ။ ကျနော်တို့နဲ့လည်း တခါမှ မဆုံခဲ့ ဖူးဘူးဆိုတော့ မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ သွားကြတာပါ။ တကယ်ဆွေးနွေးမှုက ဒီမှာ မလုပ်ဖူး လို့ အဲဒါကိုလည်း အသိပေးရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ဟိုမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ တကယ် တရားဝင် ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သူ့ကို အသိပေးရင်းနဲ့ တွေ့တာပါ။”
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း နိုင်ရန် ကြိုတင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်သော်လည်း ထပ်မံ တွေ့ဆုံမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် မသတ်မှတ်ရ သေးကြောင်း ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
“သူလည်း ကျိုင်းတုံမှာ RCSS အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ပြီးတော့ အကြိုအနေနဲ့ တွေ့ချင်တယ် ပြောလာလို့ ကျနော်တို့ သွားတွေ့တာပါ။ နေရာတို့ နေ့ရက်တို့ ဘာမှ မသတ်မှတ်ရ သေးဘူး။ ဦးအောင်မင်းတို့ အဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုက ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တွေ၊ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့တွေ ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ ကြားမှာညှိပြီးတော့ သတ်မှတ်ကြမယ်။”
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက KIO ဌာနချုပ်အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်း မပြုပါဟု လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ အနီးတ၀ိုက် အပါအ၀င် ဒေသတွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် KIO နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ ကချင်ပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် (၆) ကြိမ်ထက်မနည်း တွေ့ဆုံပြီးသော်လည်း ယနေ့ထိ ပြေလည်မှု မရသေးပေ။
သို့သော် လာမည့် တွေ့ဆုံမှုသည် အထူးသဖြင့် အစိုးရဖက်မှ အဓိကကျသည့် တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သူများ ပါဝင်လာမည့်အတွက် ယခင်တွေ့ဆုံမှုထက် ပိုမို ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟု မျော်လင့်ကြောင်း “ဒီတခေါက်ကတော့ တပ်ပိုင်းက တကယ် အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ ညွှန်ကြားမှု ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဒု-တပ်ချုပ် ကိုယ်တိုင် ပါလာတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးမှတော့ မျော်လင့်ချက် ထားတာပေ့ါ။” ဒေါက်တာ လဂျာက ပြောသည်။
KIO သည် အစိုးရနှင့် (၁၇) နှစ်ကျော် အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ရာမှ လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က စတင်၍ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရာ အချိန် (၁) နှစ်နီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော်နှင့် ဗန်းမာ် ဒေသများ အပါအ၀င် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးနေသည့် စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် (၆) သောင်းကျော် ရှိပြီဟု ကူညီပေးသူများက ပြောဆိုသည်။
KIA က အစိုးရ တပ်စခန်း တခုအား သိမ်းပိုက်
Written by သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ မေလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ Friday, 11 May 2012 17:37
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမှ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ ပူတာအိုမြို့သို့ သွားရာ ကားလမ်းပေါ်ရှိ အစိုးရ တပ်စခန်း တခုအား ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
ပူတာအိုမြို့ အခြေစိုက် အစိုးရ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ (၁၃၈) ၏ ရှေ့တန်းစခန်းအား ယမန်နေ့ နံနက် (၅) နာရီကျော် အချိန်ခန့်က ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လက်နက်ခဲယမ်း အမြောက်အများနှင့် စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိသည်ဟု KIO ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးလနန်က အခုလို ပြောသည်။
“လက်နက်အလတ်စားနဲ့ လက်နက်ငယ်တွေ အပါအ၀င် အားလုံး (၁၆) လက် ကျနော်တို့ သိမ်းဆည်းရမိတယ်။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ အင်အားထက်ပိုပြီးတော့ ယူနီဖောင်း အပါအ၀င် အရပ်ဝတ်တွေ တော်တော်များများ သိမ်းဆည်းရမိတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာတို့ အပါအ၀င်ပေ့ါ။ အကျအဆုံးကတော့ အလောင်းက (၈) လောင်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ Captain ဗိုလ်ကြီး အဆင့် အရာရှိ တယောက်ပါတယ်။”
ယင်းတိုက်ပွဲတွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ကျဆုံးမှု မရှိကြောင်း ရှေ့တန်း တပ်မှူး တဦးက ပြောဆိုသည်။
အစိုးရနှင့် KIO တို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ်ကာလက ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့ပေါ်တွင် နှစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး ရုံးဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။ ယင်းရုံးအား ယခုလ (၅) ရက်နေ့က ခလရ (၁၃၈) မှ တပ်ရင်းမှူး ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည့်အတွက် KIA ဖက်က လက်တုန့် ပြန်သည့် သဘော သက်ရောက်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“မြို့ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်အလွတ်ကို သူတို့ကနေပြီးတော့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်တယ်။ မိုင်းထောင်ပြီးတော့ ဖောက်ခွဲတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ တအိမ်လုံးကို မီးရှို့လိုက်တယ်။ အဲဒီ ဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သူတို့ တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အဲဒီကိစ္စကို လုပ်တယ် ခင်ဗျ။ မနေ့က ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာလည်း သူတို့ ခလရ (၁၃၈) လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တွေ ခံလိုက်ရတဲ့ သဘောလို့ ပြောလို့ရတယ်။”
ယင်းစခန်းသည် မြစ်ကြီးနားနှင့် ဆွမ်ပရာဘွမ် အကြား ခ့ါဂရားယန် ကျေးရွာတွင် တည်ရှိ၍ ပူတာအို ဒေသအတွင်း KIA တပ်မဟာ (၁) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားလာ လှုပ်ရှားသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ စခန်းဖြစ်ပြီး အစိုးရတပ် အင်အား (၁၀) ယောက်ကျော် ရှိသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မင်းက KIO ဌာနချုပ်အား ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုပါဟု လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လောလောဆယ် လိုင်ဇာမြို့ ဌာနချုပ် အခြေစိုက်ရာ တပ်မဟာ (၅) ဒေသ အပါအ၀င် တပ်မဟာတိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားနေသလို ဒေသတွင်း အစိုးရတပ်အင်အားများ ပိုမို ဖြည့်တင်းနေကြောင်း ဦးလနန်က ပြောသည်။
“မနေ့က ဗန်းမော်ကနေ ဒီဖက်က မော်တော်ယာဉ် (၁၅)စီး အင်အား အပြည့်နဲ့ တက်လာ တာတွေ ရှိတယ်။ လက်နက်ကြီးတွေ အပါအ၀င်ပေ့ါဗျာ။ ည(၈) နာရီလောက်မှာ ဗန်းမော် ကနေ ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ လားရှိးဖက်ကနေ အရပ်သုံး မော်တော်ယာဉ် TE (၁၀) စီး မိုးကာနဲ့ အုပ်ထားပြီးတော့ မူဆယ်ကို တက်လာတယ်။ မနေ့က ညနေပိုင်းမှာ (၁၀၅) မိုင်ကို ရောက်တယ်။”
ထို့အပြင် မေလ (၈) ရက်နေ့က ဒေါ့ဖုန်းယန် မြို့အရှေ့ဖက်တောင်ကျောပေါ်ရှိ KIA ရှေ့တန်း တပ်စခန်း ပန်စွန်ပို့စ်အား အစိုးရတပ်မှ သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသလို တပ်မဟာ(၁) ဒေသရှိ တပ်ရင်း (၁၀) ဖက်တွင်လည်း ဖြစ်ပွားနေကြာင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း KIO နှင့် အစိုးရတပ်တို့ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအာဘော် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခြင်း မရှိသော်လည်း KIA တပ်ဖွဲ့၏ မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် လမ်းတံတား ပျက်စီးမှုများကိုမူ မကြာခန ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
KIO နှင့် အစိုးရတို့ (၁၇) နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားရာမှ (၁၁) လကျော်ကြာ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းတွင် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အစိုးရနှင့် KIO နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တို့ (၆) ကြိမ်ထက်မနည်း တွေ့ဆုံပြီးသော်လည်း ယနေ့ထိ ပြေလည်မှု မရသေးပါ။
ထို့အပြင် နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ ထပ်မံ တွေ့ဆုံရန် လွန်ခဲ့သည့်လပိုင်းက ပြောဆိုမှုများ ရှိထားသော်လည်း လောလောဆယ် တဖက်နှင့်တဖက် ဆက်သွယ်မှု မရှိသေးကြောင်း ဦးလနန်က ပြောသည်။
7. ​ကေအိုင်​အေနှင့်​ အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အဖွဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ​တွေ့​ဆုံ
ကေအိုင်​အေနှင့်​ အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အဖွဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ​တွေ့​ဆုံ
မြန်မာအစိုး​ရ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​နဲ့​ ကချင်ပြည် လွတ်​မြောက်​ရေး​တပ်မ​တော် (​ကေအိုင်​အေ)က ကိုယ်စား​လှယ်တချို့​ ထိုင်း​-မြန်မာ နယ်စပ် ချင်း​ရိုင်ခရိုင်မှာ ဒီ​နေ့​ အလွတ်သ​ဘော ​တွေ့​ဆုံခဲ့​ပါတယ်။
ဒီ​တွေ့​ဆုံပွဲမှာ မြန်မာအစိုး​ရဘက်က ပြည်​ထောင်စုငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ ​ဖော်​ဆောင်​ရေး​ လုပ်ငန်း​ကော်မတီ ဒု – ဥက္ကဋ္ဌ ဦး​အောင်မင်း​ ​ခေါင်း​ဆောင်ပြီး​ ​ကေအိုင်​အေဘက်က ဒု – ဦး​စီး​ချုပ် ဗိုလ်မှူး​ချုပ် ဂွမ်​မော် ဦး​ဆောင်ပါဝင်တယ်လို့​ ကချင်အသိုင်း​အဝန်း​က သိရပါတယ်။
ဆွေး​နွေး​ပွဲ အ​သေး​စိတ်အချက်အလက်​တွေက​တော့​ မသိရ​သေး​ပါဘူး​။
ကချင်သတင်း​ဌာန အယ်ဒီတာ ကို​နော်ဒင်း​က “အဓိက သူတို့​ အရင်က ဦး​အောင်​သောင်း​ ဦး​ဆောင်တဲ့​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဖော်​ဆောင်တဲ့​ အဖွဲ့​နဲ့​ ​ကေအိုင်အိုကြား​မှာ ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေအား​လုံး​က မရှိ​တော့​ဘူး​၊​ မ​အောင်မြင်​တော့​ဘူး​၊​ လုံး​ဝရပ်သွား​တော့​ ​နောက်တဆင့်​ အသစ်ဖွဲ့​စည်း​ထား​တဲ့​ အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကော်မတီနဲ့​ ဘယ်လို​ဆွေး​နွေး​ကြမလဲဆိုတဲ့​ အပိုင်း​ပေါ့​။ အဲဒီကိစ္စကို အဓိက ညှိတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ အခု​နောက်ပိုင်း​မှာ ဒီ​ဆွေး​နွေး​ပွဲက ​အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် သူတို့​နောက်ပိုင်း​မှာ တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်ဖြစ် ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေ ထပ်လုပ်မယ်။”
ဦး​အောင်မင်း​နဲ့​အဖွဲ့​ဟာ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ရက်ပိုင်း​ကပဲ ကျိုင်း​တုံမြို့​မှာ ရှမ်း​ပြည်တပ်မ​တော် အာစီအက်စ်အက်စ်/အက်စ်အက်စ်​အေ နဲ့​ ​တွေ့​ဆုံပွဲအပြီး​ ​ကေအိုင်အိုနဲ့​ အခုလို ​တွေ့​ဆုံခဲ့​တာပါ။
ကေအိုင်အိုနဲ့​ အစိုး​ရတပ်​တွေအကြား​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​နှစ် ဇွန်လကစပြီး​ တိုက်ပွဲ​တွေ ပြန်လည်စတင်ခဲ့​တာပါ။ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့​ ကာလအတွင်း​မှာ ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ​တွေ့​ဆုံခဲ့​ပေမယ့်​ ​ပြေလည်မှုမရခဲ့​ပါ။ တိုက်ပွဲ​တွေ​ကြောင့်​ ဒုက္ခသည်​ပေါင်း​ ၆ ​သောင်း​ကျော်ခန့်​ စစ်​ဘေး​အန္တရာယ် လွတ်ရာ ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်​နေရပါတယ်။
8. ဦးအောင်မင်းနှင့် KIO ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ရေးအတွက် ပြည်တောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ KIO အဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဂျာ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဒီကနေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်းမြို့မှာ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
KIO အဖွဲ့ဟာ ဦးအောင်သောင်း
by FNG on May 20, 2012
နောက်ဆုံး သိရပြီး ၊ သေချာ မှု အရှိ နိုင်ဆုံး ဖြစ်သည့် နေပြည်တော် မှ လာ သည့် သတင်း များ
အရ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး လေးဦး ထက် မနည်း အနားပေး ခံရမည် ဖြစ် ပြီး ၎င်းတို့ ထဲ တွင်
စာရင်း ပေါက်နေ သူများ မှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း
နှင့် နိုင်ငံ ခြား ရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် တို့ပင် ပါဝင် နေသည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။
၀န်ကြီး ဌာန များ ကို လည်း ပူးပေါင်း သွား မည် ဖြစ် ပြီး အားကစား ၀န်ကြီး ဌာန ၊ လယ်ယာစိုက်
ပျိုး ရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန ၊ မီးရထား ၀န်ကြီး ဌာန တို့ မှာ အခြား ဌာန များ နှင့် ပူး
ပေါင်း ရဖွယ် ရှိ သည် ဟု အမည် မဖော် လို သည့် ညွှန်ကြားရေး မှုး ချုပ် တစ်ဦး က FNG
ကို ယနေ့ပြောကြား သည်။
ယခု ကဲ့ သို့သတင်း မျိုး ပေါ် ထွက် မလာ ခင် က မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ခောတ်
နောက် ပြန် ဆွဲ လိုသူများ ကို ချန်ထား ခဲ့ မည် ဟု ပြောကြား ခဲ့ သည်။
အကယ် ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး နေရာ အတွက် လျှာထား ပါက လက်
ရှိ ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင် လွင် သည် အခြား ဌာန တစ်ခု သို့ မဟုတ် သမ္မတ ရုံး အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်
ရ ပုဂ္ဂိုလ် ရာထူး မျိုး ရရှိ နိုင်သည် ဟု ခန့် မှန်း ကြသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ဆွမ်ပရာဘွမ် အသင်းတော်သို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိ
ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ဘက် မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းမကြား ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှဖြစ်ပွားသော မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့ (Sumprabum) အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
မေ ၁၅ အင်္ဂါနေ့တွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် သာသနာဝင်းသို့ ဒုက္ခသည် ၄၀ ကျော် ရောက်ရှိလာပြီး နောက်ထပ် ရောက်လာနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အသင်းတော်တာဝန်ရှိသူတဦး KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ယခု ဒုက္ခသည်များသည် အစိုးရထိန်းချုပ်သည့် ဆွမ်ပရာဘွမ်အနီး မိုင်ထောင် (Mai Htawng) ကျေးရွာနှင့် ဆွမ်ပီယန် (Sumpyi Yang) ကျေးရွာများမှ ဖြစ်ကြသည်ဟု သူက ဆက်ဆိုသည်။
ဆွမ်ပရာဘွမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီး ထိုဒေသသို့ မြစ်ကြီးနားနှင့် ပူတာအိုဘက်မှ အစိုးရစစ်ကူများ ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် ရွာသားများထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒုက္ခသည် အကူညီပေးသူတဦး ပြောသည်။
အင်္ဂါနေ့မှာပဲ မြစ်ကြီးနားမှ မြန်မာစစ်တပ် ယာဉ်တန်းများ ခဂရန်းယန် (Hka Garan Yang)သို့ ချီတက်လာခြင်းကြောင့် ရွာသားများ အားလုံး လုံခြုံရာတောတောင်နှင့် ၎င်းတို့၏ တောင်ယာများသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်ဟု ရွာသားများဆိုသည်။ ခဂရန်းယန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ချေ ၁၀၀ ကျော်ရှိုသည်။
ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသိန်း ဦးဆောင်သော ပူတာအိုမြို့နယ် ဒုတ်ဒန်ကျေးရွာ နယ်မြေခံ ခလရ ၁၃၈ တပ်ဖွဲ့မှ KIO ဆက်ဆံရေးရုံးအား သေနတ်များပစ်ခတ်၊ ဗုံးခွဲခြင်းများပြုလုပ်ပြီး နောက်ဆုံး မီးရှိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် KIO က ဆိုသည်။
တနှစ်နီးပါး ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် KIO စစ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၆၀၀၀၀ ကျော် ထွက်လာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းအနက် ၅၅၀၀၀ ကျော်သည် KIO ဒုက္ခသည်စခန်း ၄၀ ကျော်တွင် ခိုလုံနေသည်။
KIO မှ ဒုက္ခသည်များကို ယခုချိန်ထိ ကုလသမဂ္ဂမှ ပုံမှန် အကူညီပေးခြင်း မရှိသေးခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသည်များ အဓိက စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများ မလုံလောက်သည့်ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း KIO မိုင်ဂျာယန် အခြေစိုက် Wunpawng Ninghtoi ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
23. KIO ဌာနချုပ်အနီး တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေ
KIO ဌာနချုပ်အနီး တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေ
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့နှင့် အနီးဆုံး စခန်းဖြစ်သည့် လဂျားယန် တပ်စခန်းတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းကစ၍ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေသည်။
အစိုးရတပ်က ယနေ့နံနက် (၈) နာရီခွဲ အချိန်ခန့်မှ စတင်၍ မွန်းလွဲပိုင်း အချိန်ခန့်ထိ လက်နက်ကြီး များဖြင့် ပစ်ခတ်နေပြီး စစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်း ဖြန့်၍ တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ABSDF (NB) တပ်မှူး တဦးက အခုလိုပြောသည်။
“နားလုံဖက်ကနေ တကြောင်း တက်လာတယ်။ လဂျားယန် အထက်ဖက် ကုန်းပေါ်ကနေ တဖွဲ့ ဆင်းလာတယ်။ အဲဒီဖက်က ဆင်းလာတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ချနေ ကြတယ်။ KIA လည်း ပါတာပေ့ါ။ နောက်ပြီး အောက်က ရိက္ခာလာပို့တဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ဆော်နေတယ်။ ပစ်လိုက် နားလိုက် ထိုးလိုက်တက်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ။”
ယင်းစခန်းသည် KIO နှင့် အစိုးရတို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ်က အစိုးရတပ်များ အပါအ၀င် ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏ အခြေစိုက် စခန်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တရုတ်မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး အတွက် အရေးပါသည့် နယ်စပ်ဂိတ် တခုဖြစ်၍ လိုင်ဇာမြို့မှ ကားဖြင့် (၁၅) မိနစ်ခရီးသာ မောင်းနင်ရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့က လဂျားယန် တပ်စခန်းမှ အစိုးရတပ်များ ဆုတ်ခွာ သွားခဲ့ရာ KIA နှင့် မဟာမိတ် ABSDF တပ်ဖွဲ့များ ၀င်ရောက်နေရာယူခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းတပ်စခန်း၏ အမြင့်ပိုင်း တောင်ကုန်းပေါ်တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ ကျန်ရှိခဲ့ရာ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များက ၀ိုင်းရံ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည်။
အစိုးရတပ်က တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လဂျားယန်ကို ကျော်လွန်၍ လိုင်ဇာမြို့ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ ခဲ့သည်။ သို့သော် မြို့နှင့် အတန်ငယ်ဝေးသေးသည်ဟု ABSDF တပ်မှူးက ပြောသည်။
အလားတူ ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့ အခြေစိုက် အစိုးရ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ (၁၄၂) တပ်ရင်းမှ လက်နက်ကြီး များဖြင့် ယနေ့နံနက်မှစ၍ တနေကုန် ပစ်ခတ်နေပြီး လဂျားယန် တပ်စခန်း ဘက်တွင် ကျရောက်ပေါက်ကွဲသံများ ကြားရကြောင်း ဒေါ့ဖုန်းယန် မြို့ခံ တဦးက အခုလို ပြောသည်။
“ဒေါ့ဖုန်းယန်တပ်ရင်းက ဒီမနက် (၁၀) နာရီ လောက်ကနေ စပစ်နေတာ။ ဘယ်နှစ်လုံး လောက် ရှိမလဲတော့ မသိဘူး ပစ်နေတာ (၃) နာရီ လောက်ကြာသွားပြီ။ တနေကုန်ပဲ ပစ်နေတာ။ ပထမတော့ ခပ်စိပ်စိပ်ပဲ အခု နောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်း ကျဲလာတယ်။”
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက KIO ဌာနချုပ်အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်း မပြုပါဟု လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဒေသတွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က အစိုးရတပ်မှ KIO အား ထိုးစစ်ဆင်မှုများ တလအတွင်း ရပ်တန့်ပေးရန် ယခုလ (၁၀) ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အကယ်၍ ရပ်တန့်မှု မရှိပါက အစိုးရနှင့် ပဏာမ အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ ထားသည့် UNFC တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမည် ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စအပေါ် UNFCအဖွဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီလည်းဖြစ် KIO အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာလဂျာက UNFC က သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်တလ အတွင်း ဌာနချုပ်အနီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန် လာသည့်အပေါ် တစုံတရာ မှတ်ချက်မပေး လိုသော်လည်း “ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ တခုခုတော့ ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်။ အဲလိုတော့ မြင်တယ်လေ။” ဟု ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုများ အရှိန်လျော့ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာ ကြရန် နှစ်ဖက် သဘောတူ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီးသော်လည်း လက်တွေ့တွင် လျော့ကျမသွားပဲ တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုတိုးလာသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယင်းအပေါ် “တဖက်က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရအောင်လို့ ပြောပြီး တဖက်က စစ်ရေးနဲ့ တအားကို ထိုးစစ်ဆင် ချေမှုန်းရေးတွေ လုပ်နေတော့ အပြောကတမျိုး လုပ်ရပ်က တမျိုး ဖြစ်သလိုတော့ မြင်တယ်။” ဟု ဒေါက်တာလဂျာက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
UNFC တပ်ဖွဲ့တွင် KIO အပါအ၀င် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား (၁၁) ဖွဲ့ပါဝင်ပြီး ယင်းတို့အနက် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း ခေါ် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီ SSA/ SSPPနှင့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့က အစိုးရနှင့် ပဏာမအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သည်။
ယနေ့ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲအတွင်း KIA ရဲဘော်တဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၍ အသေ အပျောက် မရှိဟု သိရပြီး အစိုးရဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု များနိုင်ကြောင်း ရှေ့တန်း တပ်မှူးများက ပြောသည်။ သို့သော် ယင်းကိစ္စ အတည်ပြု၍ မရသေးပါ။
နောက်ဆုံး အခြေအနေအရ လဂျားယန် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် အ၀ိုင်းခံထားရသည့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့အား စစ်ကူလာရောက်ရာမှ ယခုလို တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှေ့တန်းရှိ KIO နှင့် ABSDF တပ်မှူးများက သုံးသပ်သည်။
လူသားမဆန်တာ ဘယ်သူလဲ? လူမျိုးရေး ခွဲခြားသတ်ဖျတ်တာ ဘယ်သူလဲ ?ဘာသာရေး ခွဲခြားမုန်းသီးမှုတွေနဲ့ မတရားအနိုင်ကျင့်စော်ကား သတ်ဖြတ် တာဘယ်သူလဲတွေလဲ?
လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို အတင်းအဓ္ဓမစုဆောင်း တိုက်ပွဲ မှာအရှေ့တက်မိုင်းရှင်းခိုင်းတာဘယ်သူတွေလဲ ကချင်အမျိုးသား
ရှေ့တန်းမှာသေစေတာလဲ ?ကေအိုင်အေ ဆိုတာပြည်သူတွေအသိအမြင်အသိဆုံးအမြင်ဆုံးပါပဲ။
ငပြုးကပြဲပြနေတဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လန်းဒေါင်း
ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် အရပ်သား ၃ ဦး မိုင်းနှင့်သေနတ် ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရာ ယခုလဆန်းပိုင်းအတွင်း ဗန်းမော်မြို့ နယ်၌ မိုင်းနှင့်သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးသူ အရပ်သား ၃ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁ ဦး ရှိကြောင်း ဗန်းမော်ဆေးရုံ သတင်းရပ်ကွက် အဆိုအရ သိရသည်။
မေလ ၄ ရက်နေ့က ဗန်းမော် - လွယ်ဂျယ်ကားလမ်း ၂၈ မိုင်နေရာ၌ ဟိုင်းလက်ကားတစ်စီး ဗုံးနင်းမိ၍ အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ်ကားစပါယ်ယာ ကိုချစ်သန်း သေဆုံးသွားပြီး ယာဉ်မောင်း ခိုင်ဇော်မင်း ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဆေးရုံ နှင့်နီးစပ်သည့် မြို့ခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
“ဗ ၄၁၄၃ ဟိုင်းလက်ကား ဗန်းမော်ကနေ လွယ်ဂျယ်ဘက်ကို အတက် ဗုံးနင်းမိတာ ကားခေါင်းပိုင်း ပျက်စီး သွားတယ်၊ ကားစပါယ်ရာကိုချစ်သန်းက ဗန်းမော် ညောင်ပင်ရပ်ကွက်ကပေါ့၊ ခေါင်းမှာမိုင်းစမှန်ပြီး ၄၅ မိနစ် လောက်မှာဆေးရုံမှာပဲဆုံးသွားတယ်၊ ယာဉ်မောင်းက လက်မောင်းမှာ ဒဏ်ရာရတယ်၊ ဆေးရုံတက်နေတုန်း ပေါ့ ” ဟု သူက ပြောသည်။
မည်သည့်အဖွဲ့ ထောင်သည့်ဗုံး ဖြစ်သည်ကို အတိအကျမသိရသော်လည်း ၄င်း ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်စဉ် မတိုင်မီ မေလ ၂ ရက်နေ့က တစ်ရက်အတွင်း အစိုးရစစ်တပ်မှ မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အရပ်သား ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ဗန်းမော်မြို့ အမြောက်တပ်အခြေစိုက်ရာ ရွှေပြည်သာကျေးရွာအနီးဖြစ်ပြီး အစိုးရတပ်မှ ညအချိန် မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ရွှေပြည်သာ ရွာသားတစ်ဦး သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ တာမိုင်းလုံရွာ လယ်ကွင်းအနီး နွားရှာနေသည့် နမ့်ဖားရွာသား အသက် ၄၀ အရွယ် ကိုမြင့်လှိုင် ဆိုသူ အား အစိုးရတပ်မှ မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
KIA နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲများအတွင်း အရပ်သား သေဆုံးမှုများရှိနေသည့်တိုင် နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများမှာ ယမန်နေ့ကအထိ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်
10. မြန်မာနှင့် ကချင်တပ်ကြား မြစ်ဆုံရေကာတာ ဧရိယာထဲ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မြန်မာနှင့် ကချင်တပ်ကြား မြစ်ဆုံရေကာတာ ဧရိယာထဲ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မြန်မာအစိုးရ စစ်ကြောင်းနှင့် ကချင်တပ်ဖွဲ့ကြား ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဧရိယာထဲ မေ ၁၂ နှင့် ၁၃ (စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ) နေ့က ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲများတွင် အစိုးရစစ်သားများ သေဆုံး၊ ထိခိုက်မှုရှိကြောင်း ကချင်တပ်ကဆိုသည်။
သေဆုံးသောစစ်သားအလောင်း ၂ လောင်းနှင့် ဒဏ်ရာရ စစ်သား ၄ ဦးကို တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှ မြစ်ကြီးနားမြို့ဘက် သယ်ဆောင်လာသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်ဟု ဒေသခံများဆိုသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာသည် မြစ်ကြီးနားမြို့၏မြောက်ဘက် ၂၇ မိုင်ကျော် တန်ဖရဲ မြစ်ဆုံကျေးရွာ ရွာအစွန်ဖြစ်ကာ မြစ်ကြီးနားမှ ဆွမ်ပရာဘွမ်သို့ ဦးတည်လာသော အစိုးရစစ်ကြောင်းနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ ၁၊ တပ်ရင်း ၄ ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည်ဟု KIA က ဆိုသည်။
ထိုနေရာတွင် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ စနေနေ့က တကြိမ်နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့က နောက်ထပ်တကြိမ် အချိန်အနည်းငယ်ကြာ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု တန်ဖရဲ ရွာသားများပြောသည်။
၎င်းတိုက်ပွဲကြောင့် ရွာအနီးရှိတောတောင်များတွင် တောင်ယာလုပ်ကိုင်သော ဒေသခံရွာသားများသည် ယခုချိန် ရေကာတာဧရိယာမှ ရွှေ့ပြောင်းခံရသည့် ဒေသခံများကို ပြန်လည်နေရာချပေးသည့် အစိုးရ အောင်မြင်သာ စံပြကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေပြီဖြစ်သည်။
“ဟိုတလောက ခရိုင် (မြစ်ကြီးနား) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒီကျေးရွာ(တန်ဖရဲ)မှာ မနေနဲ့ နေမယ်ဆိုရင် တောမှာနေဆိုလို့။ ဒီက အနီးအနားတောင်တွေမှာ တောင်ယာလုပ်စားပြီးနေတဲ့ ဒေသခံအချို့လည်း အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ မနေရဲတော့ဘူး။ တောင်ယာလုပ်တဲ့နေရာတ၀ိုက်တွင်မှာလဲ KIA တွေရှိနေပြီဆိုတော့ သွားလို့လည်း မရတော့ဘူးလေ။ တောင်ယာကို ဒီတိုင်းပစ်ထားပြီး ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လေ။” ဟု တန်ဖရဲ ရွာသားတဦးက ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းမကြား ဆွမ်ပရာဘွမ်အနီး စစ်ရေးအရ အရေးပါသည့် ခဂရန်းယန် (Hka Garan Yang) မြန်မာစစ်တပ် ခလရ ၁၃၈ စခန်းကို KIA တပ်မဟာ ၂ တပ်ဖွဲ့များမှ မေ ၁၀ ရက်တွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်အောက် နယ်ခြားစောင့်တပ် (ယခင် NDA-K အဖွဲ့) ထိန်းချုပ်သည့် ကချင်ပြည်နယ် ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)၏ တပ်ရင်းသစ်ကို ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (NDA-K) ခွဲထွက် စစ်သားများဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းသော KIA တပ်ရင်းသစ် အမှတ် ၃၂ သည် NDA-K ဌာနချုပ်ဟောင်း ပန်ဝါဒေသတွင် အခြေစိုက်မည်ဟု KIA ဗဟိုဌာနချုပ်မှ အရာရှိများ KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်း တပ်ရင်းသစ်၏ စစ်ယူနီဖေါင်းသည် ဘယ်ဘက် ပခုံးမှာ ‘ထင်းရှူးပင်တံဆိပ်’ နှင့် ညာဘက် ပခုံးမှာ ‘KIA တံဆိပ်’ ဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၂၅ မှစပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲများ ချီဖွေမြို့နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ် နှင့် ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဒေသခံများ KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ယင်းဒေသ ၃ ခု ကချင်ပြည်သူများသည် စစ်ဖြစ်နေချိန် ၎င်းတို့ကျေးရွာအနီး တောတောင်များတွင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ပထ၀ီအနေထားနှင့် စစ်ပွဲအခြေနေများကြောင့် ယင်းဒေသသို့ ပြင်ပမှ (မြန်မာအစိုးရထိန်းချုပ်ဒေသနှင့် တရုတ်နယ်စပ်) စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အကူညီများ ပေးရန်လည်း ခက်ခဲကြောင်း ပန်ဝါဒေသခံများဆိုသည်
ကချင်စစ်ပွဲ တလအတွင်းရပ်ရန် ယူအန်အက်ဖ်စီ တောင်းဆို
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို လာမယ့် ဇွန်လ ၁၀ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) က အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း မှာ မြန်မာအစိုးရ တပ်တွေက အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ် ယူအန်အက်ဖ်စီက သဘောထား ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒီထိုးစစ်တွေကို တလအကြာ လာမယ့် ဇွန်လ ၁၀ ရက် နောက်ဆုံးထား ရပ်တန့်ပေးဖို့ အစိုးရကို တောင်းဆို လိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ထိုးစစ်ကို မရပ်ဘူး ဆိုရင် အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်ထားတဲ့ ယူအန်အက်စီ အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက် ကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမယ်လို့ ယူအန်အက်ဖ်စီရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဒီထိုးစစ်ဆင်မှု မရပ်တန့်ရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားမှု ကို ပြန်လည်သုံးသပ် စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ ယူအန်အက်စီရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ နိုင်ဟံသာ က ပြောပါတယ်။
“အစိုးရဘက်က အပြောင်းအလဲလုပ်တာဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့စာနာမှု၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှု၊ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့လုပ်နေတာက ပိုပြီး အဓိကကျနေတယ်လို့ ကျနော်တိြု့ မင်တယ်။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဒါကိုမြင်ဖို့၊ တချို့နိုင်ငံတွေက အခုဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကို ရေရှည်မကြည့်ဘဲနဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တာတွေကို ဖွင့်ပေးတယ်။ ရပ်တန့်လိုက်တယ် ဆိုတာတွေ ရှိလာနေတော့ ဒါတွေက အချိန်မတိုင်သေးဘူးလို့ ကျနော်တို့က ဒါတွေကို ထောက်ပြချင်တယ်။”
အခုလို မြန်မာအစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်မှာ ထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာ တရုတ်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေနဲ့လည်း ဆက်နွှယ်နေတယ်လို့ နိုင်ဟံသာက ထောက်ပြပါတယ်။
“ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ကိစ္စက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စပဲ။ အဲ့ဒီဒေသမှာ အခု ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတို့၊ ရေနံပိုက်လိုင်းတို့ ဟိုက်ဒရိုပါဝါစက်ရုံကြီးတွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေအတွက်ကို ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ ဦးလေးတုိ့မြင်တယ်။ အဲ့တော့ နိုင်ငံတကာ၊ နိုင်ငံခြားအကျိုးကျေးဇူးအတွက် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကနေ့ဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေရတာဟာ မကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲလို့ မြင်တယ်။”
ယူအန်အက်ဖ်စီဟာ အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဆင်နေတဲ့ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့နဲ့ မဟာမိတ် ၆ ဖွဲ့တို့နဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်များကို ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့အထိ အစိုးရဘက်မှ မရပ်ဆိုင်းပါက အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများ ရရှိထားသော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုများကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမည်ဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က မေလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် UNFC ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကို မေလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်နေ့များတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာ၌ ကျင်းပကာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အား အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသည့် ကိစ္စကို အလေးထားဆွေးနွေး၍ ယင်းသို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုးစစ်များ မရပ်ဆိုင်းပါက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP စသည့် ပါတီသုံးခုက အစိုးရနှင့် လက်ရှိ ရရှိထားသည့် သဘောတူညီမှု အဆင့်များကို ပြန်လည် စဉ်းစားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း UNFC တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
“အပစ်အရပ်ထားတဲ့ အထဲက ပါတီကြီး သုံးခုကတော့ လက်ရှိရထားတဲ့ အဆင့်တွေကို ကချင်ကို မရပ်ရင် ပြန်ပျက် ချင်လည်း ပျက်ပါစေ၊ ကျနော်တို့ ညီညွတ်ရေးပြတဲ့အနေနဲ့ တောင်းဆိုရမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်တာပါ။ တဖက်သတ် အင်အားသုံးတာကို ရပ်ဖုိ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဖြေရှာဖို့ တောင်းတာပါ”ဟု မဇ္စျိမက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာကလည်း “ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ မရပ်ဘူးဆိုရင် သဘောတူညီမှုတွေကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်မယ်။ အခြေအနေ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ ရှေ့လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း ပြန်လည် စဉ်းစားမယ်။ တကယ်လို့ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း တခုခုတော့ စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့နှင့် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင် တွေ့ဆုံသည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ရောက်နေသဖြင့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
UNFC ၏ မေလ ၁ဝ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် “ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် အပတ်အခတ် ရပ်စဲထားသော မိမိတို့ UNFC အဖွဲ့ဝင်များမှလည်း မဏာမ သဘောတူ ထားသော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့လုပ်ငန်း စဉ် များကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရထိုးစစ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများကို အကာအကွယ်ရရေးရန်သာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားအကျိုးစီးပွား အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင် သတ်ဖြတ်နေခြင်းအပေါ် မိမိတို့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်” ဟုလည်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများအတွင်း ထိုးစစ်များကို ရပ်တန့်ထားရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးသို့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း KIO ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီးတဝိုက်တွင် အစိုးရ တပ်မ ၃၃ တပ်အင်အား ၂,ဝဝဝ ခန့် လှုပ်ရှားနေပြီး အနည်းဆုံး အမြောက် လေးလက်ခန့် ချထားကြောင်းနှင့် စစ်အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရဟတ်ယာဉ် ခြောက်စီးခန့် အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင်ထားမှုများရှိသည်ဟု သိရကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က ပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစိုးရနှင့် KIO ကြား တိုက်ပွဲများမှာ လာမည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် တနှစ် ပြည့်မြောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ မေလ ၈ ရက်နေ့အထိ နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများ အကြိမ်ပေါင်း ၁,၃ဝဝ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဟု သိရသည်။
အကယ်၍ ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရထိုးစစ်များ မရပ်စဲပါက “နိုင်ငံတကာမှ ကျန်ရှိနေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းများကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း မပြုသေးဘဲ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သွားရန်” လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီအား သတိနှင့် ကြိုဆိုလိုက်သော် လည်း အစိုးရ၏ လက်ရှိမူဝါဒများအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အောင်မြင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဦးခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားပြီး သဘောထားပြောင်းလဲမှု မရှိပါက လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
UNFC ကြေညာချက်တွင်လည်း “သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောနေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ အနေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီထောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေနှင့်အညီ အများဆန္ဒအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်သွားရန်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းနည်းလမ်း မဟုတ်သဖြင့် လက်ခံ၍ ရမည်မဟုတ်ပါ” ဟု ပါရှိသည်။
UNFC ကို ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဆင်နေသည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့နှင့် မဟာမိတ် ၆ ဖွဲ့တို့ဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF၊ မွန်ပြည်တစ်ပါတီ NMSP၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မတော်-SSA-N၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့ ငါးဖွဲ့ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပဏမ သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သည်
အစိုးရ စစ်တပ်များအနေဖြင့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ တလအတွင်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ(UNFC)က ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
KIA အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နေမှု အား ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ရပ်ဆိုင်းပေးရန်နှင့် မရပ်ဆိုင်းပါက UNFC အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပဏာ မ သဘောတူညီမှု ရရှိထားခြင်း အပေါ် ပြန်လည် စဉ်းစား သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း UNFC က မေ လ ၁၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
UNFC ၌ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး(CNF) ၊ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း(SSA-S)၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) စသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
“ထိုးစစ်ဆင်နေမှုတွေကို တောင်းဆိုထားတဲ့ အတိုင်း တလ အတွင်း မရပ်ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်သွားမယ် ဆိုတာတော့ ကြိုပြောဖို့ စောပါသေးတယ်၊ နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး လမ်းဖွင့်ပေးနေတာတွေကိုလည်း ပြန်လည် စဉ်းစား သုံး သပ်ပေး ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်”ဟု UNFC ၏ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာ က ဧရာဝတီ ကိုပြောသည်။ နိုင်ဟံသာသည် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ပြီးမှသာ စီးပွားရေးလမ်းဖွင့်ပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက် ပြောသည်။
အစိုးရသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်နေသကဲ့သို့ အခြားတဘက်၌လည်း KIA နှင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဒေသတချို့၌ ထိုးစစ်ဆင်နေ၍ အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် မှန်ကန်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဟု မယူဆကြောင်း နိုင်ဟံသာ က ဆို သည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ အား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့်အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး၊ ပြည် ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအား ဒု သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင် ၅၂ ဦးတို့ဖြင့် မေလဆန်းက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့များ၌ ဒု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ စစ်တိုင်းမှူးများ၊ ၀န်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်များ နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်။
ငြိမ်းအဖွဲ့သစ်များ၌ သမ္မတနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒု သမ္မတ၊ စစ်တပ်၏ ထိပ်တန်းအရာရှိများပါ နေသည့်အပြင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အများစုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှု ဆောင်ရွက်ထားသည့် မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် သည့် အတွက် အဖွဲ့သစ်နှင့်အတူ သမ္မတ က တိုက်ရိုက် ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမည် ဖြစ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမို သွက်လက်လာလိမ့်မည် ထင်ကြောင်း လေ့လာသူများ က ပြောဆိုကြသည်။
“ငြိမ်း အဖွဲ့သစ်မှာ ခေါင်းဆောင်တွေအစုံပါနေတယ်၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက အစပေါ့၊ ဒီတော့ သဘောတူညီမှု ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် လိုက် နာမှုတွေ ထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊ အဖွဲ့သစ်ရဲ့ လုပ်ရှားမှု မရှိသေးဘူးဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ”ဟု UNFC ၏ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး နှင့် ပအို့ဝ် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ဧရာဝတီကိုပြော သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့သစ်၏ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် စောင့်ကြည့်၍ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း UNFC ခေါင်းဆောင်များ က ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ရှိသည့် အနက် ၁၀ ဖွဲ့နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော တူညီမှု ရထားသော်လည်း KIA နှင့်အစိုးရ တပ်အကြား နေ့စဉ် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေဆဲဟု သိရသည်။
KIA နယ်မြေထဲသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အစိုးရတပ်များအား ရုပ်သိမ်း၍ နိုင်ငံရေးအရ အာမခံချက်ရှိမည့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာ ပါက KIA နှင့် အစိုးရကြား ပြေလည်သွားမည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
KIA အနေဖြင့် အပတ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲကို တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အစိုးရထံ တင်ပြ တောင်းဆိုထားသော်လည်း အစိုးရက လက်မခံကြောင်း သိရသည်။
UNFC အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် အပတ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို တဖွဲ့ချင်း လုပ်ဆောင်ထားသော်လည်း နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုကိုမူ UNFC အနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ က ပြောသည်။
KIA နှင့်အစိုးရ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် UNFC က ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရထံ တင်ပြထားကြောင်း လည်း သိရသည်။
အစိုးရနှင့် KIA တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်နေရသည့် ဒေသခံ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ခန့်မှန်းခြေ ၇၅၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း မကြာသေးခင်က ထုတ်ဝေသော လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့ (HRW) အစီရင်ခံစာတခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စတင်၍ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကချင်ပြည်နယ် တာပိန်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေ ကာတာ အနီး တပ်စွဲ ထားသည့် KIA တပ်ဖွဲ့များကို အစိုးရတပ်က ဖယ်ရှားခိုင်းရာမှ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီအပစ်ရပ်ထားတဲ့ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ မကျေနပ်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ အနေနဲ့ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တာဝန် ရှေ့လုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းတွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒီဟာကို ထုတ်ဖော်တာပါ။ ကချင်မှာ အပစ်ရပ်ဖို့ပေါ့။ အပစ်မရပ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေ ဆက်ပြီးတော့ အပစ်ရပ်တာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး တင်ပြတာပါ လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်ပွဲတွေ မရပ်တန့်ရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာတွေကို ဆိုင်းငံ့တာ၊ ရုပ်သိမ်းတာတွေ မလုပ်ဘဲ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်ဖို့ UNFC အနေနဲ့ တိုက်တွန်းကြောင်းလည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
ကေအိုင်အေနဲ့ အစိုးရအကြား တိုက်ပွဲတွေဆက်
ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရဲ့ မတ်လ (၁၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေနဲ့ အစိုးရ စစ်တပ်တွေ အကြား တိုက်ပွဲတွေ ကတော့ နေရာ အနှံ့ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလ ၁၀ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ကဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် ‘ဆွန်ပရာဘွမ်’မြို့ မရောက်ခင်၊ ‘ခဂယန်း’ ရွာအနီးက အစိုးရ စစ်တပ် ခလရ (၁၃၈) ရဲ့ ရှေ့တန်း စခန်းငယ် တခုကို ကေအိုင်အေ ဘက်က တက်ရောက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ၊ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ အစိုးရ စစ်တပ်က အရာရှိတဦး အပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင်(၈) ဦး ထိခိုက် ကျဆုံးမှုတွေ ရှိခဲ့သလို၊ ကေအိုင်အေ ဘက်ကလဲ တဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အေ စစ်ဖက်ရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။
တရက်တည်းမှာပဲ ဒေါ့ဖုန်းယန် အနီးနဲ့ ချီဖွေ မြို့နယ် အတွင်းတွေမှာလဲ ထိတွေ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့သေးရုံမက၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်းမှာလည်း ကေအိုင်အေနဲ့ အစိုးရ စစ်တပ် အကြား တိုက်ပွဲ (၄)ကြိမ် အထိ ဖြစ်ပွား ခဲ့သေးကြောင်း သိရပါတယ်။
သောကြာနေ့နဲ့ စနေနေ့ ကလည်း တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ ကေအိုင်အေနဲ့ အစိုးရတပ်တို့ အကြား မနှစ်က ပြဿနာ စတင် ပေါက်ကွဲ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ အနီးမှာလည်း တိုက်ပွဲတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဘက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေ ပြန်လည်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြရေး အတွက်၊ ဧပြီ (၂၀)ရက်နေ့ လောက်မှာ အစိုးရဘက်က ပေးပို့လာတဲ့စာ အပေါ်၊ ကေအိုင်အို ဘက်က ဧပြီ (၂၉)ရက် နေ့က အကြောင်းပြန်ကြား ထားပေမယ့်လည်း အခုချိန် အထိတော့ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ နောက်ထပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုတာ အတိအကျ မသိရ သေးပါ။
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ အားအရေးယူ ပေးပါရန်တင်ပြချက်
ဆင်ဘိုအထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးမျိုးဇင်မှ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေသည့် ဦးလှထွန်း၊ ဦးမြင့်နိ်ုင်၊ ဦးတောမ၊ ဦးစန်းလွင်ဦးစီးသော ရွှေတူးဖော်ရေးမော်တော်(စက်တပ်လှေ)(၅၇)စီးသည်ဆင်ဘိုမြို့၏မြောက်ဘက် မံဖွားကျေးရွာ ၏အရှေ့ဘက် ကမ်းနောင်ဆရာ ရေလည်ကျွန်း တွင်စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရန် နုတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရ။
မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးဦးမျိုးဇင် မော်တော်(၅၇)စီးအားတစ်စီးလျှင် ကျပ်ငွေတစ်သိန်းခွဲ(၁၅၀၀၀၀)နှုန်းထားဖြင့်ကောက် ခံနေကြောင်းသိရ
၄င်းရွှေတူးဖော်ခြင်း ကြောင့် ကိုင်းမြေဧက (၆၅)ဧကခန့်ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိပါသည်ဟု ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖများနှင့်ပြည်သူများမှပြောကြား ။၄င်းကျွန်းပေါ်နှင့်မြစ်ကမ်းပါးတွင်းရှိ မြေနုကျွန်းဧက(၃၀)ဧကယခုအတောတွင်းပျက်စီးသွားနိုင်ကြောင်းသိရ။
မြို့မိမြို့ဖ (၂၃)ဦးလက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးသက်ဆိုင်ရာသို့ဆက်လက်တင်ပြမည်ဟုသိရ။
ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးမတရားမြေနုကျွန်းများ သိမ်း ၊ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးများထံ ဆပ်ကြေးကောက်
ဆင်ဘိုမြို့နယ် အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးမျုိးဇင်အားပြည်သူများ ဒေသခံများမကျေမနပ်ဖြစ်နေ၊
ယခုရွှေတူးလျှက်ရှိသောနေရာအနီး မြေနုကျွန်းမြေကို မံဖွားရွာနေ ဦးညွှန့်တင် ထံ ငွေကျပ် နှစ်သိန်းငါးသောင်း
(၂၅၀၀၀၀ိ/-)ဖြင့်ရောင်းချ၍ ၀ဲကြီးကျေးရွာပိုင်မြေနုကျွန်းငှားရမ်းရာတွင်လဲ ငွေကျပ်ခြောက်သောင်း
အလားတူတာဟိုးနားကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးထံတွင်လဲ မြေနုကျွန်းတစ်ဧက ငွေကျပ်၂၅၀၀၀ိ/-
ကောက်ခံ၍ မြို့နယ်ခွဲအုပ်ချူပ်ရေးမှူး ထံသို့ကောက်ခံ၍ ရရှိငွေအားပေးရကြောင်းသိရ။မံကင်းကျေးရွာ ငွေနှင့်ဆန်
တောင်းယူခဲ့ကြောင်း ပင်တောကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးထံတွင်လဲ ငွေကျပ်၆သောင်းနှင့်ဆန်နှစ်အိတ် အမွေးနုတ်ပြီး
ကြက်တစ်ကောင် တောင်းယူခဲ့ သည်။တောပင်လုံ ဆန်တစ်အိပ်နှင့်ငွေသုံးသောင်း ၊ ရေနားပင်လုံ ကျေးရွာမှ အုပ်ချူပ်ရေးမှူးအား
ပထမမြစ်ကျင်းအတွင်းမှ လက်လုပ်ရွှေလုပ်ကိုင်နေသူများထံမှ တစ်ဦးလျှင် သုံးသောင်း ကောက်ခံရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရေနားပင်လုံအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ ရွှေကျင်သမားများဆီသို့ မသွားရဲကြောင်းပြော။
သာဓကအနေနှင့်ယခင်ကျေးရွာဥက္ကဌအား ပေါက်ပြားနှင့်ပေါက်၍ ရန်ရှာ ခဲ့ဖူးကြောင်း ၊ပြောပြရာ မလုပ်နိုင်လျှင် နုတ်ထွက်စာ
တင်စသဖြင့်ချိန်းခြောက်၍ ငွေရရှိရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့်တောင်းခံလျှက်ရှိနေကြောင်း
မြစ်ကြီးနားဗန်းမော်ပြေှးဆွဲသော ဆင်ဘိုပိုင်စက်တပ်လှေမှန်သမျှ မြို့နယ်ခွဲအုပ်ချူပ်ရေးမှူးရုံး အသုံးစရိတ်အဖြစ်
တစ်စီးလျှင် ကျပ်ငွေ၁၀၀၀ိ/-နှုန်းဖြင့်ဖြတ်ပိုင်းမပါ ကောက်ခံနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေမှပြောကြား နေ
အင်းလေးဘုတ်၅၀၀ိ/- အနှေးယာဉ်ဘုတ် ၁၀၀၀ိ/-ကောက်ခံကြောင်း စက်လှေကော်မတီ ဦးသိန်းအောင်မှ ပြောကြား
ကေအိုင်ကေ ဖောက်ခွဲရေးသမား (၃၀)ယောက် အနက် (၇) ယောက်ဖမ်းမိ
၁။တန်မိုင် အောင်(၂၅)နှစ် ၄/၄၂ မော်ဖောင်း
၂။တန်ဂွန်း ၃၂နှစ် နယ်မြေ(၁)၊ ရှဒေါင်
၃။ဘရန်လီ (၄၁)နှစ် အထက်မော်ဖေါင်း
၄။ယုထိုင် (၅၆)နှစ် ရှဒေါင် ၊ မလိယန် ဟုသိရ။
၆။ မ မရွယ်(၂၂)နှစ်တာလောကြီး
​ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီး​ တိုက်ပွဲများ​ ပြင်း​ထန်
ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီး​ တိုက်ပွဲများ​ ပြင်း​ထန်
ကချင်လွတ်လပ်​ရေး​အဖွဲ့​ (​ကေအိုင်အို) ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီး​မှာ အစိုး​ရတပ်​တွေနဲ့​ ကချင်တပ်​တွေအကြား​ တိုက်ပွဲ​တွေပြင်း​ထန်​နေတယ်လို့​ ​ကေအိုင်အိုက ​ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲ​တွေဟာ ဧရာဝတီမြစ် အ​ရှေ့​ဘက်ခြမ်း​ ​ကေအိုင်အိုတပ်မဟာ ထိန်း​ချုပ်နယ်​မြေ​တွေမှာ ဖြစ်ပွား​နေပြီး​ ဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီး​ တပ်မဟာ ၅ ထိန်း​ချုပ်နယ်​မြေထဲမှာ​တော့​ အပြင်း​ထန်ဆုံး​ပဲလို့​ ​ကေအိုင်အို ​ပြော​ရေး​ဆိုခွင့်​ရှိသူ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
“တပ်မဟာတိုင်း​မှာ တိုက်ပွဲ​တွေက​တော့​ ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ မ​နေ့​က​တော့​ ဌာနချုပ်ခွင်ထဲမှာပဲ ၄ ကြိမ်ရှိတယ် ဒါ အနည်း​ဆုံး​ပေါ့​ဗျာ။ တခြား​နယ်​မြေမှာ ဖြစ်တဲ့​ သတင်း​တွေက​တော့​ အချိန်မီ​ရောက်မလာတာ ရှိတယ်။ ဖြစ်တဲ့​ဟာ​တွေက​တော့​ အချိန်တို အ​တောအတွင်း​ ဆို​ပေမယ့်​ ပြင်း​ထန်ပါတယ်။ ​ရှေ့​တန်း​မှာ အမှန်တကယ် တိုက်ပွဲဝင်​နေတဲ့​ ရဲ​ဘော်​တွေအတွက်​တော့​ ဒါ အား​လုံး​က ပြင်း​ထန်ဆုံး​ တိုက်ပွဲ​တွေပါပဲ။ သူတို့​ အဓိကထား​ အား​ကိုး​တာက​တော့​ လက်နက်ကြီး​ပါ။ သူတို့​ အမြဲတမ်း​တိုက်ပွဲတိုင်း​ လက်နက်ကြီး​နဲ့​ ပစ်တာမျိုး​တော့​ ​နေ့​စဉ်နဲ့​အမျှ လက်နက်ကြီး​နဲ့​ ပစ်တာ​ပေါ့​နော်။ တခါတ​လေကျရင် တိုက်ပွဲမရှိ​ပေမယ့်​ သူတို့​ဘက်က လာတိုက်တာမျိုး​ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာမျိုး​ မရှိ​ပေမယ့်​ သူတို့​ တပ်က​နေပြီး​တော့​ လက်နက်ကြီး​နဲ့​ ​နေရာတကာကို ပစ်တာမျိုး​ ဒါ အမြဲတမ်း​ သူတို့​ လုပ်​နေကြတာပါ။”
ဒီ​မေလထဲမှာ မ​နေ့​က ၉ ရက်​နေ့​အထိ တိုက်ပွဲ​ပေါင်း​ ၅၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွား​ခဲ့​ရာမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ​တွေ အများ​ဆုံး​ဖြစ်ပြီး​ နှစ်ဘက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ​တွေ ရှိတယ်လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ အ​ရေအတွက်ကို​တော့​ မသိရဘူး​လို့​ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲ​ကြောင့်​ လိုင်ဇာဒုက္ခသည်စခန်း​ဘက် ထွက်​ပြေး​လာသူ​တွေ ​နေ့​တိုင်း​လိုရှိ​နေပြီး​ လိုင်ဇာစခန်း​တခုတည်း​မှာ ၁ ​သောင်း​ ၅ ​ထောင် ​လောက် ရှိတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ကျဉ်း​ကျပ်တဲ့​ တဲအိမ်မှာ လူ​တွေစုပြုံ​နေကြပြီး​ ရာသီဥတုကြမ်း​တမ်း​တဲ့​အတွက် ကျန်း​မာ​ရေး​ပြဿနာက အကြီး​ဆုံး​ဖြစ်​နေတယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။ ​ရေ​ကောင်း​ရေသန့်​ မသုံး​ရတာ၊​ သန့်​ရှင်း​မှု မရှိတာ​တွေ​ကြောင့်​ ဝမ်း​ရောဂါ၊​ ငှက်ဖျား​ရောဂါနဲ့​ အာဟာရချို့​တဲ့​ တာ​တွေ အဖြစ်များ​တယ်လို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကိုယ်စား​လှယ်​တွေနဲ့​ ဆက်လက်​ဆွေး​နွေး​ဖို့​ကိစ္စမှာ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ဧပြီ ၂၉ ရက်​နေ့​တုန်း​က ​ကေအိုင်အိုဘက်က ​တွေ့​ဆုံမယ့်​နေရာ ​ရွေး​ချယ်ပြီး​ စာပို့​ထား​ပေမယ့်​ အစိုး​ရဘက်က ဘာမှအ​ကြောင်း​မပြန်​သေး​ဘူး​လို့​ ဆိုပါတယ်။
အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဖော်​ဆောင်​ရေး​အဖွဲ့​ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့​စည်း​တဲ့​အထဲမှာ နိုင်ငံ​တော်အစိုး​ရရဲ့​ ဆုံး​ဖြတ်ပိုင်ခွင့်​ရှိတဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်​တွေ ပါလာတယ်လို့​ ​ပြောလို့​ရ​ပေမယ့်​လည်း​ လမ်း​ပြ​မြေပုံနဲ့​မူဝါဒ မ​ပြောင်း​လဲဘူး​ဆိုရင် ယုံကြည်မှု တည်​ဆောက်တာ၊​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​ဖော်​ဆောင်တာ အများ​ကြီး​ အချိန်ယူရဦး​မှာပဲလို့​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
အစိုး​ရရဲ့​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဆွေး​နွေး​ပွဲ လမ်း​ပြ​မြေပုံဟာ တဖက်သတ် ​ရေး​ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲ တိုင်း​ရင်း​သား​တွေနဲ့​လိုက်​လျောညီ​ထွေတဲ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ ကိုယ်စား​လှယ်​တွေပါ ပူး​ပေါင်း​ပါဝင်​ရေး​ဆွဲတဲ့​ ​မြေပုံပဲဖြစ်သင့်​တယ်လို့​လည်း​ ဦး​လနန်း​က ​ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံ​တော်သမ္မတက ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲ​တွေကို ရပ်တန့်​ဖို့​ မနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်း​က အမိန့်​ပေး​ထား​တာ ၅ လ ရှိသွား​ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇေယျာအောင် က “အခုတော့ ခေတ်မီလက်နက်တွေလည်းရထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် KIA ကိုတိုက်မှာဖြစ်တယ်။” ဟု အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပန်ဝါသတင်းကဆိုသည်။
အစိုးရတပ်မှ ဖမ်းဆီးသော KIA စစ်သားတစ်ဦး၏ပြောဆိုချက်ဖြစ်သည့် “NDA-K အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း လယောက်ဇယ်လွမ်း (Layawk Zelum) အဖွဲ့မှ ခေါ်တဲ့အတွက် ပန်ဝါသို့ KIA တပ်ဖွဲ့များ လာရခြင်းဖြစ်တယ်။” ဆိုသည့်စကားကိုလည်း အစည်းဝေးတွင် ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၄ တွင် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (New Democratic Army-Kachin) အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းကို ၎င်း၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဇယ်လွမ်း (Zelum)က ရက်တို အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင် အင်အား ၄၀၀ ခန့်ရှိ KIA တပ်ဖွဲ့များက ပန်ဝါသို့ ရုတ်တရက် ချီတက်လာပြီး ပန်ဝါမြို့နှင့် ၎င်းမှ ၁၁ မိုင်အကွာ နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ရင်း အမှတ် ၁၀၀၂၊ လုပီ အခြေစိုက်စခန်းကို ၀ိုင်းထားလိုက်သည်။
တချိန်ထဲမှာ အစိုးရ စစ်ဗျူဟာ ပန်ဝါမြို့တွင် အလျင်အမြန် အခြေစိုက်လိုက်ပြီး ၀ိုင်းထားသော KIA တပ်များကို ဧပြီ ၂၆ နှင့် ၂၇ နှစ်ညဆက်တိုက် ရဟတ်ယာဉ်နှင့် ဂျက်တိုက်လေယာဉ် များဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ယခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် KIA တပ်များ မြို့ပြင်သို့ ဆုတ်ခွာပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစိုးရတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ပူးပေါင်းပြီး ပန်ဝါမှ KIA ရှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်လာရာ ယခုချိန် တိုက်ပွဲများ အထူးသဖြင့် ပန်ဝါ မြောက်ဘက် ဖရဲဒေသဘက်တွင် နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ပူတာအိုကို အဓိက ဆက်သွယ်ပေးသည့် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအို လမ်းကြောင်းရှိ မြန်မာအစိုးရစစ်စခန်းကို ယနေ့ ကြာသပတေး နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ပူတာအို နယ်မြေခံ ခလရ ၁၃၈ မှ အခြေစိုက်ထားသော ခဂရမ်းစခန်း (Hka Garan post) ကို KIA တပ်မဟာ ၂ အထူးတပ်ဖွဲ့မှ နံနက် ၆ နာရီ မတိုင်ခင် ၁ နာရီခန့် ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်လိုက်သည် ဟု တပ်မဟာ ၂ အရာရှိတဦး ပြောသည်။
ပစ်ခတ်မှု ပြီးဆုံးပြီးနောက် စခန်းတွင် မြန်မာစစ်သား အလောင်း ၈ လောင်းကိုတွေ့ရှိပြီး MA သေနတ် ၁၈ လက်၊ လက်နက်ကြီး ၁ လက်၊ ကြည်ဆန်သေတ္တာ ၅ လုံး၊ ပစ္စတို ၁ လက်၊ ဆန်နှင့် စစ်ဝတ်စုံ ၁၀၀ စုံကိုလည်း သိမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု တပ်မဟာ ၂ အရာရှိက ဆက်ဆိုသည်။
စစ်ဝတ်စုံ အများအပြားကို မြင်တွေ့ရခြင်းသည် “မြန်မာစစ်သားများက သာမန်အရပ်ဝတ်များဖြင့် ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားသွားလာပြီး ရှေ့တန်းတွင်နေရာယူသွားရန် စီမံချက်ဖြစ်သည်” ဟု KIA က ယူဆထားသည်။
မေ ၉၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံ အရပ်သားအစိုးရသစ်က ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် ၁၇ နှစ် အပစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးကို ဖျက်ဆီးပြီး စစ်ဆင်ရေး စတင်ပြုလုပ်လာခြင်း ၁၁ လ ပြည့်ပါပြီ။
ယင်းကာလအတွင်း နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ အနည်းဆုံး ၇ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီမှု လုံးဝမရရှိခဲ့ပေ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော မြန်မာအစိုးရသည် အကြီးဆုံး ကချင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kachin Baptist Convention, KBC) ကို စတင် ရန်ပြု တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်း KBC အဖွဲ့ချုပ်အောက် ချီဖွေဇုံနယ် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (E.C) အစည်းဝေးကို ချီဖွေမြို့ရှိ ဘုရားကျောင်းဝင်းတွင် ပြုလုပ်နေစဉ် မြန်မာစစ်တပ်မှ လက်နက်ငယ် ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ချီဖွေစခန်းမှ အစိုးရစစ်သားများ၏ ဘုရားကျောင်းသို့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ချန်မောကုန်းအသင်းတော်မှ တရားဟောဆရာ ဒိန်ကျန်း (Ding Chyang)၏ ညာခြေဒူးတွင် ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့သည်။
၎င်းပစ်ခတ်မှုကို ဧပြီ ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲ အစည်းအဝေး အဆုံးသတ်ဆုတောင်းနေချိန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆရာဒိန်ကျန်းက KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ကျွန်နော့်ခြေထောက် ညာဘက် ဒူးမှာထိတယ်။ အခုလမ်းရှောက်လို့ မရဘူး။ ဇုံနယ်အသင်းတော် ဥက္ကဌ ဆရာယိန်းခေါ ကိုတော့ သူ့ခေါင်းဆံပင်မှာ ကျည်ဆံရှပ်ထိလို့ ဆံပင်အချို့ ပြတ်သွားတယ်။” ဟု ဒဏ်ရာရရှိသော ဆရာကပြောသည်။
အသင်းတော် E.C. အစည်းအဝေးကို ဧပြီ ၂၆-၂၇ နှစ်ရက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းဝေး စတင်သည့်နေ့မှ စပြီး မြန်မာစစ်သားများ၏ ခြောက်လန့်ပစ်ခတ်ခြင်းခံနေရသည်ဟု အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်သော အသင်းတော် ဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။
“သူတို့ပစ်နေတာက ရှေ့ရက်(ဧပြီ ၂၇)ကနေပစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် မထိဘူး။ အစကတော့ ကျွန်နော်တို့ကို ပစ်တာ မထင်ဘူးလေ။ သူတို့ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံ အချို့က ကျွန်နော်တို့နေတဲ့ ဘော်ဒါဆောင် သွပ်ပေါ်တွေမှာ သွားကျတယ်။ နောက်မနက် ကျွန်နော်တို့ ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန် ပြန်ပစ်တယ်။ အဲဒီတော့မှ သူတို့ တမင်ချိန်ရွယ် ပစ်တယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်လေ။” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့် ချီဖွေ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းသည် အင်မိုင်ခမြစ် (မေခမြစ်)နှင့် ချီဖွေချောင်းဆုံ အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
ပစ်ခတ်သော စစ်သားများသည် ချီဖွေမြို့မှ အရှေ့ဘက် တောင်ကုန်းတွင် အခြေစိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည်ဟု အသင်းတော်ဆရာများဆိုသည်။
၎င်းလုပ်ရပ်အား အစိုးရစစ်သားများက “လူများ စုစည်းနေသောကြောင့် ပစ်ခတ်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြချက်ပေးနေကြောင်း ဆရာတစ်ဦးကပြောသည်။
ယခုလိုပစ်ခတ်မှုသည် ချီဖွေ အနီးတ၀ိုက်တွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) စစ်ကြောင်းများ ရောက်လာချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင်လည်း မြန်မာစစ်သားများ ချီဖွေသို့ မော်တာများ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၆ နေရာတွင် ကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး အရပ်သားနေအိမ် ၂ လုံး ပျက်စီးသွားသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ယခုလို လူနေ ရပ်ကွက်များသို့ မော်တာပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံအချို့သည် ၀ိုင်းမော်မြို့သို့ ထွက်ပြေး သိမ်းရှောင်နေသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
KBC အသင်းတော်များသည် ၂၀၁၂ ဇွန် ၉ ရက် (မြန်မာအစိုးရမှ KIO ကိုစတင် တိုက်ခိုက်ခြင်း) မတိုင်ခင် “ကချင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည်တခုလုံး ငြိမ်းချမ်းရန်အတွက်” ဆုတောင်း ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် စစ်ဖြစ်လာပြီး နောက် “ကချင်အမျိုးသားများ ထာဝရဘုရားသခင်ပေးသော ကိုယ်ပိုင် အချုပ်အခြာအာဏာ ရရှိရေးအတွက်” ပြောင်းလဲ ဆုတောင်းလာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း KBC အဖွဲ့ချုပ်အောက် အသင်းတော်ဇုံနယ်ပေါင်း ၁၅ ပါးနှင့် ၎င်းအောက် အသင်းတော် စုစုပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အသင်းတော်ဝင် ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု KBC ကဆိုသည်။
ချီဖွေဇုံနယ် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော် ကို ပန်ဝါ၊ ဖီမော၊ ချန်းမော်၊ ဇီးအွန်၊ ထိကော၊ ကောယွန်၊ ဆော့လော်၊ ထော့လောန်၊ ချီဖွေ၊ မန်လန့်၊ လော်ခေါင်၊ ထိုက်ရှိန်၊ ဂျမ်နောင်၊ ရှန့်ကျူ၊ လောင့်ဖြေ၊ တမူခုန်း စသည့် ဒေသမှ အသင်းတော် စုစုပေါင်း (၁၆) ပါးဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပြည်ထောင်စု နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၀ နယ်သို့ရောက်ရှိ
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ နေပြည်တော်မှ ပြည်ထောင်စု နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့က ယမန်နေ့က ဝ နယ်ဖက်ရောက်ရှိကာ ဝ အာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး ဦးဆောင်တဲ့ အယောက် ၃၀ အဖွဲ့ တဖွဲ့ ပန်ဆန်းကို ရောက် တယ်။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ တော့ အယောက် ၃၀ လုံး မတက်ဘူး။ ၁၄ ယောက်ဘဲတက်တယ်။ နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စဘဲ၊ အခု ဒီလောက်ဘဲပြောနိုင်တယ်” - ဟု UWSP/UWSA ပြောခွင့် ရ ဦးအောင်မြင့် ကပြောပါသည်။
မေလ ၉ ရက်နေ့ အထူးဒေသ ၂ ခေါ် UWSP ဝ ပြည်သွေးစည်းရေးပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မြို့တော် ပန်ဆန်းသို့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး သိန်းဌေးက ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ရောက်ရှိကြောင်း၊ ပန်ဆန်းမြို့၌ တည အိပ်ပြီး ယနေ့ အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မနက်ဖြန်မေ ၁၁ ရက် နှစ်ဖက်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး ကျိုင်းတုံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါမည်ဖြစ် ကြောင်း ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ဤကဲ့သို့ ဆက်၍ပြောပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေးက လားရှိုးကနေလာတာ။ ပန်ဆန်းကနေ ကျိုင်းတုံကိုလာဖို့ တြိဂံတိုင်းက စစ်အင်အား အချို့လွှတ်ပြီး သွားကြိုတယ်။ မိုင်းလားတပ်ကောဘဲ။ မိုင်းလားမှာလဲ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံကြဦးမယ်ပြော တယ်။ ဘာတွေပြောဆိုဆွေးနွေးမယ်တော့မသိဘူး” - ဟု ဆို၏။
ဝ နှင့် မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် နဝတ အစိုးရ နှင့် အပစ်ရပ်ခဲ့၏။ အသွင်ပြောင်းရေး အစီအစဉ် ကြောင့် ၂၀၀၉ မှ၂၀၁၁ နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ မြန်မာအစိုးရနှင့် စစ်ရေးအရ ပြန်လည်တင်းမာခဲ့၏။ လက်ရှိ ဦး သိန်းစိန်အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းက ဒုတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်ယူခဲ့ကြသည်။
30. ငြိမ်းအဖွဲ့သစ် ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ခက်နိုင်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော်လည်း ၎င်းတို့ချမှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကြောင့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် မလွယ်ကူကြောင်း ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က ပြောဆိုလိုက်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော ဗဟိုကော်မတီအနေနှင့် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ ထူထောင် သုံးစွဲခြင်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဖွဲ့ဝင်များ – သမဝါယမ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၊ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ သစ်တောဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း၊ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး၊ ပြည်နယ်/တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ၁၀ ဦး၊ စစ်တိုင်းမှူး ၁၀ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦးနှင့် တခြားအဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် ၅၂ ဦး
31. ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့သစ်ကို ဖွဲ့စည်း
ယင်း မိုင်း ပဒေသာ တိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာစစ်သား ၄၀ နီးပါး ကျဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများနှင့် KIA တပ်မဟာ ၃ အရာရှိများက KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
တိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်ကြောင်းမှူးအပါဝင် မြန်မာစစ်သား ၃၀ ကျော် ကျဆုံးပြီး အချို့ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု KIA တပ်ရင်း ၁ နှင့် ၂ အရာရှိများဆိုသည်။
ယင်း စစ်ကြောင်းသည် ကိုင်ထိပ်စခန်းမှ နမ့်ခမ်းသို့ ထွက်သွားစဉ် အင်အား ၁၀၀ နီးပါးရှိသော်လည်း တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မူလစခန်းသို့ ပြန်လာသော စစ်သား ၄၀ လောက်သာရှိသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများ က KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
မတ်လ က သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကြား နိုင်ငံရေးစကားပြောရန် တွေ့ဆုံခြင်း ကျဆုံးပြီးနောက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ဖက်စစ်ပွဲအရှိန် တက်လာသည်။
ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် CPI ကုမ္ပဏီမှ အရာရှိတစ်ဦးက ရွှေ့ပြောင်းခံရသော မြစ်ဆုံဒေသခံပြည်သူများအား စည်းရုံးပြောကြားခဲ့သည်။
စည်းရုံးတွေ့ဆုံပွဲကို ပြီးခဲ့သည့်လ ဧပြီ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းအထဲမှ ရွာသားများကို အစိုးရ ပြန်လည် နေရာချပေးသည့် အောင်မြင်သာ စံပြကျေးရွာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (China Power Investment Corporation, CPI) မှ အရာရှိ တစ်ဦးက ရွာသားအချို့နှင့်တွေ့ဆုံ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် (KDNG)မှ စားဂျီးက ပြောသည်။
၎င်းတွေ့ဆုံပွဲတွင် CPI မှ အရာရှိက တရုတ်ဘာသာဖြင့် စည်းရုံးပြောကြားချက် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို KDNG မှ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး မေ ၇ ရက် တနင်္လာနေ့က ဖြန့်ချီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင် CPI အရာရှိက “မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးဟာ လုံးဝ စိတ်ချရပါတယ်လို့ ဒီနေရာမှာ အာမခံပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားရင် မြစ်အထက်ပိုင်းမှာရေကန်ကြီးဖြစ်လာလို့ အရင်ကထက် ရှုခင်းပိုလှလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကြရင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် တွေ အများကြီး လာပါလိမ့်မယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်လာပါ လိမ့်မယ်။ ခရီးသွားလာရေးပိုကောင်းလာပါ လိမ့်မယ်။” ဟု ပြောဆိုထားသည်။
သူကဆက်ပြီး “ကျွန်တော်ဘရာဇီးကနေ ရေကာတာစီမံကိန်းတခုလေ့လာပြီးပြန်လာတာပါ။ အီတိုင်ပု လို့ ခေါ်တဲ့ရေကာတာပါ။ သရီးဂျော့(ရှ်) ရေကာတာမရှိခင်က အီတိုင်ပုရေကာတာဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပေါ့။ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိပြီး စီမံကိန်းမစတင်ခင်က အဲဒီနားကရွာဟာ အလွန်ပင်ပန်းဆင်း ရဲပြီး လူဦးရေ တစ်သောင်းပဲရှိတဲ့ရွာ ပါ။ ရေကာတာဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဘရာဇီးရဲ့အချမ်းသာ ဆုံးမြို့ဖြစ်လာပြီး လူဦးရေ သုံးသိန်းထိတိုးလာတယ်။” ဟု CPI အရာရှိက ပြောထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမိန့်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆိုင်းငံကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း CPI ကုမ္မဏီမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒု- သမ္မတနဲ့တွေ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် အောင်မြင်သာရွာကို ရေ၊ မီးထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ၎င်းကိစ္စကို အစိုးရက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဒု-သမ္မတကပြောခဲ့ကြောင်း တွေ့ဆုံပွဲတွင် CPI အရာရှိကပြောကြား ထားသည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို စီးပွားရေးပညာရှင်များ ဝေဖန်
မြန်မာပြည်က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ်ဟာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာ အပြောင်းအလဲတွေကို ဖန်တီးမပေးဘဲ၊ အရေးကြီးတဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ လူတစုက လက်ဝါးကြီးအုပ်တာမျိုးကို ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ ဆိုးရွားတဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ စီမံလုပ်ကိုင်မှုအပိုင်းက အားနည်းချက်တွေ လူသားအရင်းအမြစ်အပိုင်းမှာ အားနည်းတာတွေဟာ ရေရှည်စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအတွက် အဓိက အဟန့်အတားတွေအဖြစ် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်က အတည်ပြုထားပြီး သမ္မတက လက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲ ကျန်တော့တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကို ပြည်တွင်းက ဖက်စပ်ထည့်ဝင်မှုမလိုဘဲ ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ၅ နှစ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ နှစ်ရှည် မြေငှားရမ်းခွင့်တွေ ခွင့်ပြု ထားပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးသုတေသနနဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ (Economist Intelligence Unit)က စူမနာ ရာဂျာရသ်နမ်က မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ တိတိကျကျ မရှိသေးတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားက ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ၀င်လာပြီး ကုမ္ပဏီအငယ်နဲ့ အလတ်စားတွေကို သိမ်းကျုံးဝယ်သွားတာမျိုးဖြစ်လာရင် ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ အလားအလာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စီးပွားရေးပညာရှင် ပါမောက္ခ ရှောင်တန်နယ်ကလည်း `အကယ်၍ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဟာ အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက စီးပွားရေးမှာ အခွင့်ထူးရနေတဲ့ အပေါင်းအပါတစုကို မျက်နှာသာပေးနေဦးမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးမှာ စနစ်ဟောင်းက ခရိုနီတွေကပဲ ဆက်ပြီး ခြယ်လှယ်နေဦးမယ်´ လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်တွေကို ထုတ်ပေးတဲ့နေရာ၊ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်တွေကို တင်းကျပ်ထားတာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးသုတေသနနဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ Economist Intelligence Unit အဖွဲ့က စူမနာ ရာဂျာရသ်နမ် ကလည်း “မြန်မာပြည်က စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ထိန်းချုပ်ထားတာက ပြဿနာတရပ်ဖြစ်နေတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ချီးကျူးပြီး အနာဂတ် အလားအလာအပေါ် အကောင်းမြင်သုံးသပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (အိုင်အမ်အက်ဖ်) ရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်မှာလည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိပေးထားတာရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာ အဆင့်တိုင်းကို သတိထားပြီးဖွင့်ပေးဖို့၊ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ရေးလည်း အာရုံစိုက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အိုင်အမ်အက်ဖ်ရဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးသုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာသစ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အလျင်စလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရမယ့် အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အိုင်အမ်အက်ဖ်က သတိပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အချိန်ယူလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ အများပြည်သူတွေကို အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ဖို့ အိုင်အမ်အက်ဖ်က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
20. တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေ စီစစ်ပြီး သုံးစွဲမှသာ စီးပွားရေး တိုးတက်နိုင်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး Letrat Ratanavanich ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ မကြာခဏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီအခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ရေခဲတောင်တွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်အကောင် အတော်များများနဲ့ သစ်ကုလားအုပ် ၂ ကောင်ကို တောင်းခဲ့တဲ့အတွက် ပို့ပေးခဲ့ရဖူးကြောင်း ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်က ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေတွေကို စီစစ်ပြီး သုံးစွဲမှသာ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဲဒီကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းက ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်
ဒု-သမ္မတ ခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ဒု-သမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း မေ ၃ ရက် ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးက အမိန့်အမှတ် ၁၂/၂၀၁၂ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလုပ်ငန်းကော်မတီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဒုတိယ သမ္မတစိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ထုတ်ပြန်လိုက် တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ တာဝန်နှစ်ရပ်ကတော့ ပြည်နယ် အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်း နဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးခြင်းဆိုပြီး ပါရှိပါတယ်။
ပြည်နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးခြင်းမှာ အပစ်အခတ်ရပ်တာ၊ သတ်မှတ်နေရာမှာနေတာ၊ သတ်မှတ်နေရာကနေ တခြားကို လက်နက်နဲ့မသွားဖို့၊. ဆက်ဆံရေးရုံးထားရှိရေး နဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့နဲ့ အချိန်နေရာသတ်မှတ်ပေးဖို့ ပါပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်းမှာ- ပြည်ထောင်စုအတွင်း အမြဲနေထိုင်ရေး၊ ပါတီထူထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံရန်နဲ့ ပြင်ဆင်လိုပါက လွှတ်တော်တွင်းမှာ အများသဘောတူ ဆန္ဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရေး၊ ဥပဒေဘောင်တွင်း အပြီးဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ နေထိုင်ရေးနဲ့ တခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၇ ဦးက အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ပါဝင်သလို ကချင်၊ ကယား၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ပြည်နယ်တွေက ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူးတိုင်းက ၀န်ကြီးချုပ်တွေ။ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ၃ခုကလွဲလို့ ကျန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်း ၁၀ တိုင်းက စစ်တိုင်းမှူးတွေ၊ ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဝင်းနဲ့ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့က အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းရင်းသားတွေက ၁၀ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းရင်းသားတွေက ၁၀ ဦး ပါဝင်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ချုပ် ဦးတင်မျိုးကြည်က ကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ပြရမယ်လို့ သမ္မတရုံးအမိန့်စာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးဗဟိုကော်မတီတွေမှာတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့က ဦးဆောင်ဖွယ်ရှိပါတယ်
ပန်ဝါ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓကျောင်းဝင်းတွင် မြန်မာအစိုးရ တပ်စခန်း ချ
ကချင်ပြည်နယ် ယခင် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (NDA-K) ဌာနချုပ် ပန်ဝါမြို့သို့ ပို့ထားသော မြန်မာအစိုးရတပ်များက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း များကို ၎င်းတို့၏ တပ်စခန်းများအဖြင့် အသုံးပြုနေကြောင်း ဒေသခံများဆိုသည်။
ယခုချိန် ပန်ဝါမြို့ရှိ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော် ၂ ပါး (လော်ဝေါ် နှင့် KBC) နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အစိုးရစစ်သားများ တပ်ချနေရာယူထားသည်ဟု ဒေသခံများ ကချင်သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) က ပန်ဝါကို ဝန်းရံလိုက်ပြီး နောက်တနေ့မှာ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ဗျူဟာ ပန်ဝါတွင် အခြေစိုက်လာသည်ဟု မြို့ခံများဆိုသည်။ ယင်းနောက် မြစ်ကြီးနားမှ စစ်ကူ ၂၀၀ ကျော်အား ပန်ဝါသို့ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် သယ်ပို့ထားသည်ဟု ဆက်ဆိုသည်။
ကချင် နယ်ခြားစောင့်တပ် (ယခင် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း ဦးဆောင်သော NDA-K) ထိန်းချုပ်သော ပန်ဝါကို ယခု မြန်မာစစ်ဗျူဟာမှ ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက် မြို့ထဲမှ KIA တပ်များ လိုက်လံရှင်းလင်းရေးကို အစိုးရတပ်များ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဒေသခံများဆိုသည်။
ယခုချိန်ထိ မြန်မာစစ်တပ်အောက် ကချင် နယ်ခြားစောင့်တပ် ထိန်းချုပ်သော တရုတ်နယ်စပ်အနီး ပန်ဝါမြို့ကို မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို KIA မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု ဒေသခံများဆက်ဆိုသည်။
ဧပြီ ၂၆ နှင့် ၂၇ ညများတွင် ပန်ဝါမြို့မှ ၁၁ မိုင်အကွာ လုပီ အခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ရင်း ၁၀၀၂ ကို ၀ိုင်းရံထားသည့် KIA တပ်ဖွဲ့များကို မြန်မာစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်များမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများဆိုသည်။
ယင်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် KIA ဘက်မှ သေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည်ဟု ပန်ဝါဒေသခံများ KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။
မေ ၄ ရက်ထုတ် မြန်မာအစိုးရ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ က “ပန်ဝါ ပတ်ဝန်းကျင် တိုက်ပွဲများတွင် KIA စစ်သားအလောင်း ၂၉ လောင်းတွေ့ရှိသည်” ဟု ဖေါ်ပြချက်ကို ရှေ့တန်းမှ KIA အရာရှိများက “မဟုတ်မမှန်ကြောင်း” ငြင်းဆိုထားသည်။
သို့သော် အစိုးရတပ်များ အချင်ချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုရှိပြီး သေဆုံး ထိခိုက်မှုရှိသည်ဟု KIA ရှေ့တန်းသတင်းက ဆိုသည်။
ယနေ့ထိ ပန်ဝါမြို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပန်ဝါ-ချီဖွေလမ်းကြောင်းတွင် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
ဖနိဒါ | သောကြာနေ့၊ မေလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၂ မိနစ်
ဖြစ်ခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ-ဗကပ အဖြစ် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက အစိုးရလက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်